မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: 2010
I'm Malkul Maut
O Angel I'm afraid to die,
IÂ‚m afraid this moment is your last,
Nor did you read the Holy Qur'an.
Undoubtedly you will dwell inahell.
(This poem is supported byaMyanmar Chinese Muslim 贵强)
Posted by Ordinary person at 10:13 PM No comments:
Was JESUS (Prophet Isa A.S) Born On December 25th? ??
Many people think that Jesus Christ was born on the 25th December; and to most Christians, this isaholiday known as Christmas. But surprisingly, there is neither Biblical nor historical evidence to confirm this date, on the contrary, there are indications in the New Testament that show that Jesus was born on other than this date. Historical facts also prove that December 25th is the day observed by pagans as the birthday of some of their gods.
In this concise article, we do not intend to present facts which prove that December 25th was the birthday of some gods, nor prove from an Islamic stance that Jesus was not born on this day. Our aim is to prove from the Bible that Prophet Isa (Jesus) was not born on this day. Here we present three evidences from the Bible itself.
DETAIL ARTICLE ON
Posted by Ordinary person at 10:03 PM No comments:
with one heart, one brain
serving to my Master
I miss him uncountably
I wish to be more closer to him
with heart beats and wet tears
But the true love of my master
is as wide as an ocean
and my love to him
is likeadrop of the water
When I looked back to my past
My master mercy upon me
protected me from darkness
He shown me the door with light
Day by day passed very fast
I knew that it is nearer
to see my master in real world
but now let me serve the Oness
who I ever Love
Posted by Ordinary person at 4:07 AM No comments:
Haroon Mosque was registered under the Royal Act of Islamic Mosques and the official number of the Mosque is #2 in the year 1947.
Haroon Mosque was named after the father of Muhammad Yusuf Bafadel – “Haroon Bafadel”.
At first, the mosque was situated on the bank of Chaopraya River around 200 years ago. It wasavillage called “Ton Samrong” on the east of the bank of the River of King. The Mosque was made of wood and it was said to be built in Java style mixed with Ayuthaya arts. So the first name of the Mosque is “Masjid Ton Samrong”.
In the year 1837 or around 173 years ago, Musa Bafadel an Indonesian-Arab trader from Pantiyanah south of Borneo sailing between Siam, Malaya and Indonesia, arrived here in Ton Samrong village. He decided to reside in this place and brought3sons with him: Haroon, Uthman and Ishaaq. Uthman headed for Malaysia, Kadah State and resided there. Ishaaq traveled to Cambodia and resided there. Haroon continued his father businesses between Siam and Malaya. He then traveled up and down Bangkok and Ayuthaya and metalady named Umdang Poom whom he later married. They hadason named “Muhammad Yusuf”.
After Musa Bafadel passed away, Haroon the only son who possessed all the properties of his father in Siam looked after his son “Muhammad Yusuf” until he turned intoayoung man. On 12th Rabi Ul Awal A.H. 1299 or A.D. 1879, Haroon Bafadel recorded in his testament that he hadawish to give all of his properties in Siam asalegacy to his son Muhammad Yusuf. Two years later, Haroon passed away and Muhammad Yusuf Bafadel took care of his legacy including land around the mosque and the construction of the mosque too.
In 1899, Royal Thai Government under King Rama V, saw that the land on the bank of Chaopraya River where the mosque located was suitable for Royal Custom House. Therefore, the Government offered Yusuf Bafadel pieces of land in the inner side in exchange of the land of Ton Samrong but continued the right to use the pier in order to access to the River as normal.
The wooden construction Mosque was moved to the inner land.
In 1934, Muhammad Yusuf decided to replaceawooden mosque withabrick and lime. Muhammad Yusuf then sacrificed his properties by selling land on Silom Road for 180 Chang. There was also charity made by locals, Indian traders to build this new mosque.
The new mosque was the talk of the town in size, wooden decorative art and craftsmanship.
This mosque was named “Behind Custom House Mosque”, and “Wat Muang Kare Mosque” which was named after Buddhist Temple “Wat Muang Kare”.
Later on in the year 1947, Haroon Mosque was registered #2 under the Royal Act of Islamic Mosques.
Special thanks to Imam Abdul Ahad.
Posted by Ordinary person at 12:54 AM No comments:
Posted by Ordinary person at 11:06 PM No comments:
မူဟာရမ် ၁ ရက်နေ့ (ခ) အစ္စလာမ်နှစ်သစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မွတ်စလင်မ် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးခံစားချက်တွေမတူကြပါဘူး။ ဒီလို နေ့ထူးကို သိမှတ်ခြင်းအားဖြင့် သာသနာ့ကျင့်စဉ်တွေကို ကြိုးစားအားထုတ်ကြရန် အစ္စလာမ်သာသနာအတွက် အသက်ပေးခဲ့ကြသော တမန်တော်များ၊ အီမာန်သခင်ကြီးများ နှင့် ဆွဟာဗာ သာဝကကြီးများအား သတိရပြီး ဆုမွန်ဒိုအာတောင်းပေးကြရန် မွတ်စလင်မ်များကို အထူးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ်သာသနာသည် နှစ်သစ်ဟူ၍ သောက်ခြင်း မူးခြင်း အပျော်အပါးလိုက်ခြင်းတို့မှရှောင်ကြည်ပြီး မိမိ၏ နှစ်ဘဝအရှင်ကို သတလျှက်၊ မြတ်နဗီတမန်တော်၏ ဩဝါဒတော်များ ကိုလိုက်နာလျှက်ရှိကြသည်။ သစ္စာတရားအပေါ်မှာ အသက်ရှင်လျှက်ရှိကြသည်။
မြန်မာမွတ်စလင်မ်များမှာ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ သွန်သင်ဆုံးမမှုကို လိုက်နာကြရင်း မြန်မာဘုရင်အဆက်ဆက်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင်သော်လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လူမျိုးတို့အတွက် အသက်ပေး၍ ကာကွယ်ခဲ့ကြသည်မှာ သမိုင်းထင်ရှားရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
Posted by Ordinary person at 11:44 PM No comments:
Labels: Islamic New Year
ဟီဂျရသ်ဖြစ်စဉ် ကပေးသော မြန်မာမွတ်စလင် များအတွက် သင်ခန်းစာများ
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆ) နဲ့နောက်လိုက် ဆွဟာဗာ သာဝကတော်တွေ ရဲ့ မဒီနာဆီ ဟီဂျရသ်ပြုရွေ့ပြောင်းခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ဟာ လူနည်းစု အဖြစ်နေထိုင်ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာ မွတ်စလင်တွေ အတွက် တန်ဖိုးကြီး လက်တွေ အသုံးချနိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ အများအပြားရှိနေပါတယ် ၊ လူဘ၀မျက်နှာစာ အသီးသီးမှာ လက်တွေ အသုံးချနိုင်တဲ့ အသုံးဝင်လွန်းလှတဲ့ဒီ စံနမူနာ ကောင်းတွေကို ချပြ ခဲ့တဲ့ ကိုယ်တော့် ဆီကနေ ကျွန်တော်တို့တတွေ လေ့လာ သင်ယူသင့်ကြပါတယ် . ယသရိဘ် လို့ အမည်တွင်ရာ မြို့မြေ မဒီနာဆီ သို့ ဟီဂျရသ်ပြု ပြောင်းရွေ့ပြီး တဲ့နောက်ပိုင်း မှာ ဒီရွာသာသာ နေရာလေးကနေ အစ္စလာမ်ရဲ့ဒုတိယ အမြင့်မြတ်ဆုံး အဓိကအကျဆုံး မြို့တော်အဖြစ်ပြောင်းခဲ့ပါတယ် ။မွတ်စလင်မဟုတ် တဲ့တိုင်းနိုင်ငံ အသီးသီးမှာ မွေးဖွား ကြီးပြင်း နေထိုင် ၇ပ်တည်နေရတဲ့ မွတ်စလင်တွေ အတွက်ကတော့ ဒီဟီဂျရသ် ဖြစ်ရပ် ဟာ လေးနက်အသုံးဝင်လွန်းလှတဲ့ ကိုယ်တော်ပေးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေဖြစ်နေပါတယ် ….
(၁) တစ်သားတည်းကျသော စစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံသားစိတ်ဓါတ်
True Spirit of Citizenship
မြိုမြေ မဒီနာမှာ စတင် အခြေချခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲ ထူးမြတ်မြိုရွာ မက္ကာ ကနေ ရောက်ရှိလာကြတဲ့ အလ္လဟ် ချစ်နဗီ ကိုယ်တော်မိုဟမ္မဒ်နဲ့ ဆွဟာဗဟ် တွေဟာ မိခင်နယ်မြေဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြို့မက္ကာ အတိုင်း အလာတူး မြိုမြေ မဒီနာကိုလည်း ကို ချစ်မြတ်နိုးကာ စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်.. မဒီနာမြို့အပေါ်ထားရှိတဲ့ ကိုယ်တော့်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တတွေအနက် တစ်ခုကတော့ မဒီနာမြို့တော်အား နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ရိုသေလေး မြတ်ထားရာ အထူးမြတ် ပြုရာ နေရာဒေသအဖြစ် ကြေငြာ ပါတယ်
ကိုယ်တော်မိုဟမ္မဒ် (ဆွ)မှ မိန့်ကြားခဲ့သည်၊......အီဗရာဟင်(တမန်တော် )သည် မက္ကာမြို့အား ရိုသေ ထူးမြတ် ရာ အဖြစ်ကြေငြာတော်မူခဲ့သည်။ ယင်းမြို့တွင်နေထိုင်သူများအပေါ်သို့လည်း (ရဟ်မသတ် ဂရုဏာအဖြာဖြာချပေးတော်မူပါ၇န်) အလ္လဟ်အရှင်မြတ်အား တောင်းဆုပြုတော်မူခဲ့သည်။ (တမန်တော်) အီဗရာဟင် က မက္ကာမြို့အား ရိုသေအလေးမြတ်ပြုတော်မူသကဲ့သို့ ငါကိုယ်တော်သည်လည်း မဒီနာ ကိုလည်း ရိုသေအလေးမြတ်ပြုတော်မူကြောင်း ကြေငြာတော်မူလိုက်သည်။ (တမန်တော်) အီဗရာဟင်မှ မက္ကာမြို့သားများ အပေါ် ( အလ္လဟ်အရှင်ထံမှ ကောင်းချီးမင်္ဂလာအဖြာဖြာ )တောင်းခံ တော်မူခဲ့သည့် အတိုင်းငါကိုယ်တော်သည်လည်း (အလ္လဟ်အရှင့် ထံမှ) ကောင်းချီးမင်္ဂလာ ကို ဆဒ် နှင့်မူဒ် အလေးချိန် နှစ်ဆချီးမြင့်ပေးတော်မူရန် တောင်းခံခဲ့ပြီ .....မွတ်စလင်ကျမ်း (ဆွဟီး) ဟဒီးဆ် အမှတ် ၁၃၆၀
ကိုယ်တော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ) နဲ့ နောက်လိုက်ဆွဟာဗာသာဝကကြီးတွေဟာ သူတို့နေထိုင်နေရာဖြစ်တဲ့ မဒီနာမြို့အား ကျုးကျော်ရန်လိုသူတွေရဲ့အန္တရယ်ရန်စွယ်မျိုးစုံ တွေကနေ ရွံရွံချွံချွံ အသက်ပေးပြီး ကာကွယ်ခုခံပေးခဲ့ကြတာပါ...မူလမိခင်နယ်မြေဖြစ်တဲ့မက္ကာကနေ မဒီနာကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့ မျိုးနွယ်တူ တွေရဲ့ ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတောင် ကိုယ်တော်နဲ့ ဆွဟာဗာ အပေါင်းတို့ဟာ ကာကွယ်ပေးခဲ့တာကို ကျွန်တော်တို့တတွေ အထင်သားတွေမြင့်နိုင်ပါတယ် နမူနာအားဖြင့် ဆိုရရင် ဟီဂျရိ၅ခုနှစ် မှာ အင်အားများပြားတဲ့ မက္ကာသား ကိုရိုက်ရ်ှမျိုးနွယ် ဦးဆောင်တဲ့ မဟာမိတ်တွေက မဒီနာကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုတွေကနေ စွမ်းစွမ်းတမံ ကာကွယ်ပေးခဲ့ကြတယ် ..
ဟိဂျရသ်ရွေ့ပြောင်းပြီး ၈နှစ်ပြီးနောက်မှာတော့ အလ္လဟ်ချစ်မဟာ တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ) နဲံ အဂ္ဂဆွဟာဗာ(ရသွေ့) တွေဟာ မက္ကာမြို့အား ပြန်လည် အောင်နိုင်ခဲ့ သော်လည်း မူလဌာနေဖြစ်တဲ့ မက္ကာမြို့မှာပြန်လည်အခြေမချခဲ့တော့ပဲ မဒီနာမြို့ ဆီကို ပြန်သွားခဲ့ကြတယ် ..ကိုယ်တော် (ဆွ) အပါအ၀င်ဆွဟာဗာတွေ မဒီနာမြို့မှာပဲ အသက်ကုန်လွန်တဲ့အထိ နေထိုင်ခဲ့ကြတယ် ။။အဲဒီချိန်မှာ လူတစ်ချို့ က ကိုယ်တော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)နဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ဆွဟာဗာတွေဟာ အောင်ပွဲရပြီးနောက်မှာတော့ မက္ကာမြို့ဆီကို ပြန်လည်လိမ့် မယ်လို့တွက်ဆခဲ့ကြပေမဲ့ လည်း မဒီနာဆီပြန်ခဲ့ကြတယ် အဲဒီမြို့ကနေ ပဲ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ် ၊
မွတ်စလင်လူနည်းစု အဖြစ်နေထိုင်ရှင်သန်ကြရတဲ့ မြန်မာအပါဝင် ဥရောပ၊ အမေရိကန်၊ နဲ့ နိုင်ငံများစွာ နေထိုင်ရှင်သန်ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ မွတ်စလင်တွေကလည်း မိမိနေထိုင်ရာ တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တော်ဝင်နိုင်ငံသားကောင်းတွေ၊အဖြစ် သစ္စာစောင့်သိရိုသေသင့်ကြပါတယ် ၊ နိုင်ငံသားအဖြစ်ရိုသေ သစ္စာစောင့်ထိန်းခြင်းနဲ့ ယုံကြည်ချက်(အိမာန်)အကြားမှာ ဘယ်လို ဆန့်ကျင် ဘက် ၊ ပဋိပက္ခမှ မရှိပါဘုး၊
တမန်တော်မြတ်(ဆွ) နဲ့ ဆွဟာဗာ(ရသွေ့) တွေဆောင်ရွက်ပြသခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေဟာလည်း မိမိတို့နေထိုင်ရာ ဒေသရဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းအကျိုးကို ဆထက်တပိုးထမ်းဆောင် သင့်ကြပါတယ်
(၂) ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်မှု
မက္ကာမြို့ကနေ ရွှေ့ပြောင်းရောက်၇ှိခဲ့ကြတဲ့ အလ္လဟ်ချစ်တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ) နဲ့နောက်လိုက်ကောင်းဆွဟာဗာတွေဟာ မဒီနာမှာ ရှိနှင့်နေပြီးသား လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းတစ်ရပ်ကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ၊မဒီနာလူအဖွဲ့အစည်းမှာဆိုရင် အစ္စလာမ်ကို လက်ခံကြတဲ့ အာရဘ်မျိုးနွယ်တွေရှိနေသလို ဂျူးလူမျိုးတွေလည်းရှိနေကြတာပါ.....ဥာဏ်အမျှော်အမြင်ကြီးမားလှတဲ့ ကိုယ်တော်မြတ်ဟာ အဲဒီအုပ်စုတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးထူထောင်နိုင်ဖို့ အတွက် မီသဟ်က် မဒီနာဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ် . အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ၊လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ် ခွင့် နဲ့ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်း တွေကို အကာကွယ် ပေးတဲ့ အချက်များစွားပါဝ်ငတဲ့ ယင်းမဒီနာ မီသဟ်က် ကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ် အတိုချုပ်ဖေါ်ပြရမယ်ဆိုရင် ....
ဂျူးနှင့်မွတ်စလင် များ.တစ်စု ချင်းဆီသည် မဒီနာဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပေဒအရ ပြည်သူများကို တိုက်ခိုက်ရန်ပြုလာသော မည်သူကိုမဆို ဆန့်ကျင်ရာတွင် ဖေးမကူညီပေးရမည်။ (မဒီနာ မီသဟ်က်)
အဆိုပါ မဒီနာမီသက်ဟ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း ဆီရသ်အီဗနေဟီရှမ်းမှာ ဖေါ်ပြထားတာကတော့......
သူတို့၏ ဆက်ဆံေ၇းသည် ၇န်လို အန္တရယ်ပြုမှုအစား အချင်းချင်းအကြား အပြန်အလှန်ထားရှိသော အကြံပြု နှီးနှောတိုင်ပင်ခြင်း ၊ စာနာဖေးမထောက်ထားမှု များကိုသာဖြစ်စေလိမ်မည် စာနာထောက်ထားမှု ၊ကောင်းမြတ်သောကိူ်ကျင့်သိက္ခာ များသည် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း နှင့်အနာတရဖြစ်မှုများနှင့် တစ်သီတစ်ခြားဆီးဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦး၏ လုပ်ရပ်မှတပါး အခြားမည်သူမှ တာဝန်မရှိချေ၊ အလ္လဟ်အရှင်မြတ်သည် ဤ ဖွဲစည်းပုံ အား ထိန်းသိမ်းတော်မူသော အရှင်ဖြစ်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် မတရားမှု ပြစ်မှုကျုးလွန်မှုများအတွက် အကာအကွယ်မဖြစ်စေရ .. (ကြည့် ဆီရသ် အိဗနေဟီရှမ်း စာမျက်နှာ ၁၁၀-၁၁၁ )
အလားတူ ကျွန်တော်တို့ လူနည်းစုမွတ်စလင်တွေ ကလည်း တခြားသော လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းအတူယှဉ်နေထိုင်ယုံမက မိမိတို့ တက်နိုင်သလောက် ကောင်းကျိုးပြု ထောက်ပံ့ဖေးကူ သင့်လှပါတယ် ..မဒီနာတွင် ကောင်းကျိုးပြုပြခဲ့တဲ့စံပြတမန်တော် မိုဟမ္မဒ် နဲ့ ဆွဟာဇာ(ရသွေ) တွေဟာ မဒီနာရှိတခြားလူအဖွဲ့အစည်းတွေကို ကောင်းကျိုးပြု ပုံဖေါ်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ကလည်း အကောင်အထည်ဖေါ်သင့်လှပါတယ်...
ဤသည်မှာရော.... ကိုယ်တော်၏ စန္နသ်တော်ကို အကောင်အထည် ဖေါ်ခြင်းမဟုတ်ပါလား?
(၃)လူမှုအဖွဲ့စည်းအား တိုးတက်ဖွံဖြိုးစေခဲ့ခြင်း နှင့်
အလ်အဇ်ဟရ်အစ္စလာမ့်တက္ကသိုလ် (အီဂျစ်) မှ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ၀ါအီလ် ဆီဟဘ် ၏
Hijrah Lessons for Muslim Minorities အား ကိုးကားပါသည်။ ဆရာ့အား အလ္လဟ်အရှင်နှစ်သက်တော်မူပါစေ........
Special thanks to Brother Thet Ko
Posted by Ordinary person at 9:14 PM No comments:
Click on picture to see clearly
Posted by Ordinary person at 2:52 AM No comments:
Posted by Ordinary person at 7:04 PM No comments:
Latest Pictures of Hajj this year ( 2010 )
Posted by Ordinary person at 3:07 AM No comments:
ခင်မင်တဲ့ မောင်နှမတွေ အတွက် Yen ta fo တရုတ်ခေါက်ဆွဲ
တရုတ်ခေါက်ဆွဲချက်နည်းကို မေးတဲ့သူလေးတွေတိုးလာလို့ ဒီနေ့အားချိန်ရှိတုန်း ရေးပြီးပို့စ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီနေ့ Yen ta fo တရုတ်ခေါက်ဆွဲချက်စားဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုးတွေ Asia ကို migrant လုပ်သွားတုန်းက Yen ta fo လည်းပါသွားတာပေါ့။ Thai - Malaysia မှာ မွတ်စလင်မ်ဆိုင်မဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ်မစားတဲ့ အသားတွေပါတယ်နော်။ Asiaသွားလည်တတ်တဲ့သူတွေ သတိတော့ထားပေါ့။
About Yen ta fo
Yen ta fo Noodle is came from chinese langue “ Ngueng Ngoue Foo” when go to taijew chinese , They call Yueng Tao Foo , Then to Thai , we call Yen ta fo
Ngueng Ngoue Foo is mean bean – cured cheese
ဒီခေါက်ဆွဲက မြန်မာပြည်ကိုမရောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ တရုတ် Taijew ဘက် ကအစာပါ။ Taijew လူမျိုးတွေက ထိုင်းနဲ့မလေးကို migrant လုပ်ခဲ့ကြတယ်လေ။ တရုတ်ခေါက်ဆွဲကို soup ရည်နဲ့စားသုံးကြတာ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေမှာ များတယ်။ မြန်မာပြည်မှာခေါက်ဆွဲကြော်များတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
၁) ကြက်သားရင်အုံသားကိုပါးပါးလှီး ပြီး ငရုတ်ကောင်း မှုန့် (black pepper)၊ ကြက်သွန်ဖြူမှုန့်၊ ဆား၊ ငံပြာရည်တို့နဲ့ နယ်ပြီး နာရီဝက်လောက် နှပ်ထားပါ။ ပြီးရင် ဆီနဲ့အဲဒီကြက်သားတွေကိုကြော် အိုးမှာမကပ်အောင် နဲနဲမွှေပေး။ ကြက်သားကျက်လာရင် soup ဖြစ်အောင် ရေထည့် ဆား-ငံပြာရည်ထပ်ဖြည့်ပြီး soup ရေပွက်ပွက်ဆူလာရင် အိုးကို မီးဖိုကချလို့ရပါပြီ။
၂) ကော်ပြန့်ကြော်ပါ (vegetable spring roll) မမီးက လုပ်ပြီးသားကော်ပြန့်ကို ထိုင်းဆိုင်ကဝယ်ပြီးကြော်တယ်။
၃) တရုတ် ဟာလာလ် ငဖယ်တုံး (chiu chow fish cake) ကိုပါးပါးလှီးပြီးကြော်ပါ။
၄) ရေနွေးတည်ထားပါ ရေနွေးဆူလာရင် ကန်စွန်းရွက် အရိုးလေးတွေကို အဲဒီအိုးထဲထည့်ပြီး အရင်ပြုတ် ၅ မိနစ်ကြာရင် အရွက်တွေပါထည့်ပြုတ်ပါ။
၅) ပြုတ်ပြီးသားမုန့်ဖတ်ကို ကိုယ်စားသလောက်ပုဂံထဲထည့်၊
ကြက်သားပြုတ် နဲ့ soup ရေထည့်၊
ကော်ပြန့်ကြော်နဲ့ တရုတ်ငဖယ်ကြော်တွေကို အရွယ်အသင့်အတင့် ကပ်ကျေးနဲ့ဖြတ်ပြီးထည့်၊
yen ta fo sauce (halal) အနီရောင်ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်းထည့်၊
ငရုတ်ဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက် အစပ်ကြိုက်ရင်လည်း ၁ ဇွန်းထည့်၊
ဆား ငံပြာရည် လိုရင်ထပ်ထည့်၊
အားလုံးကိုပုဂံထဲမှာ ရောသမမွှေပြီး မြိန်မြိန်ရှက်ရှက် သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ။
Posted by Ordinary person at 8:19 PM2comments:
Posted by Ordinary person at 6:52 PM No comments:
Fastingon the day of Arafa
Special thank to Sister Rose
Posted by Ordinary person at 2:43 AM No comments:
ကုရ်ဘာနီ မပြုပိုင်သော သားကောင်များ
၁ . နားရွက်ပြတ်နေသော သေားကောင်အား ကုရ်ဘာနီ ပြုခြင်း မပိုင်။ (အာလမ်ဂီရိကျမ်း၊ တွဲ- ၄၊ စာ ၈၁)
၂. လျှာပြတ်၍ မိမိအစားအစာကို မစားသောက်နိုင်သော သားကောင် (အာလမ်ဂီရိကျမ်း၊ တွဲ -၄၊ စာ ၈၀)
၃. သိုး၊ ဆိတ်တို့တွင် နို့တိုင် တစ်တိုင် ကန်းနေသော သားကောင် (ရှာမီကျမ်း၊ တွဲ - ၅၊ စာ - ၂၁၃)
၄. ကျွဲ၊ နွားတို့တွင် နို့တိုင် ကန်းနေသော သားကောင်။ ထိုနည်းတူစွာ နို့အုံဖြတ်ထားရသော သားကောင်၊ နို့အုံတွင် ဒဏ်ရာရရှိနေပြီး နွားငယ်အား နို့မတိုက်နိုင်ဖြစ်နေခြင်း၊ ရောဂါထင်ရှားစွာရှိနေသော သားကောင်များကို ကုရ်ဘာနီ မပြုပိုင်ပါ။ (အာလမ်ဂီရိကျမ်း၊ တွဲ-၄၊ စာ-၈၀)
၅. ကျွဲ၊ နွားတို့တွင် နို့တိုင် တစ်တိုင်ကန်း၍ ခြောက်နေခဲ့သော် ကုရ်ဘာနီ ပြုပိုင်၏ ။ သို့သော် နှစ်တိုင်ကန်းပြီး ခြောက်သွေ့နေခဲ့သော် သို့မဟုတ် ပြတ်နေခဲ့သော် ကုရ်ဘာနီ မပြုပိုင်ပါ။ (ကေဖာယသွလ်မွဖ်သီကျမ်း၊ တွဲ - ၈၊ စာ -၁၈၇)
၆. ဖို + မ အင်္ဂါဇာတ်ပါသော ဆိတ်မ ကုရ်ဘာနီ မပြုပိုင်။ ခဆွီ (သင်းကွတ်) သားကောင် ပိုင်၏ ။ (အဇီဇွလ်ဖသ၀ါကျမ်း၊ တွဲ - ၁၊ စာ - ၇၁၄)
၇. သားကောင်၏ မျက်စိ နှစ်ဖက်လုံး ကန်းနေမှု၊ (သို့မဟုတ်) မျက်လုံးတစ်လုံးကန်း၍ တစ်လုံးမြင်ရပြီး၊ ၄င်းမြင်နေရသော မျက်စိသည် သုံးပုံ တစ်ပုံ (သို့မဟုတ်) ထို့ထက်ပင် မမြင်ရတော့ပါမူ၊ အလားတူ နားရွက်၏ သုံးပုံတစ်ပုံ (သို့မဟုတ်) ထို့ထက်ပင် ပို၍ ပြတ်နေပါက ၄င်းသားကောင်တို့အား ကုရ်ဘာနီ ပြုခြင်း မပိုင်။
၈. သားကောင်သည် ခြေသုံးခြောင်းနှင့်သာ သွားလာနိုင်ပြီး စတုတ္ထခြေဖြင့် ထောက်ပင် မထောက်နိုင်ပေ။ (သို့မဟုတ်) စတုတ္ထခြေဖြင့် ထောင်နိုင်ရုံသာ ရှိ၍ ၄င်းခြေဖြင့် မသွားနိုင် ဖြစ်နေသော် ယင်းသားကောင်အား ကုရ်ဘာနီ ပြုပိုင်ခွင့် မရှိပေ။ အကယ်၍ ထိုခြေသည် သွားလာသည့်အခါ မြေပေါ်တွင် ထောက်၍ သွားနိုင်ပြီး သွားရာတွင် ၄င်းခြေကို အားပြုနိုင်လျက် ထော့နဲ့ ထော့နဲ့ သွားနိုင်လျင် ထိုသားကောင်အား ကုရ်ဘာနီ ပြုပိုင်၏ ။
(ရဒ်ဒွလ်မုဟ်သားရ်ကျမ်း၊ တွဲ - ၅၊ စာ- ၃၁၆)
၉. သားကောင်သည် အလွန်ပိန်ချုံး၍ အရိုးပေါ် အရည်တင်ဖြစ်နေသည့် အဖြစ် (သို့မဟုတ်) ဇဗဟ် လည်လှီးသော နေရာအထိ မိမိကိုယ်တိုင် မသွားနိုင်ပါက ယင်းသားကောင်အား ကု၇်ဘာနီ ပြုလုပ်ခြင်း မပိုင်ပေ။ သို့သော် ရောဂါကြောင့် မဟုတ်ပဲ ပင်ကိုယ်ကပင် ပိန်သည့် အမျိုးဖြစ်ပါက ပိုင်သွားသည်။သို့သော် ၀၀ဖြိုးဖြိုး သားကောင်အား ကုရ်ဘာနီပြုလုပ်ခြင်းသည် သာပို၍ ကောင်း၏ ။ (ရဒ်ဒွလ်မုဟ်သားရ်ကျမ်း၊ တွဲ - ၅၊ စာ - ၂၈၂)
၁၀. သွားမရှိသော သားကောင်အား ကုရ်ဘာနီပြုခြင်းမပိုင်၊ အကယ်၍ ကျန်ရှိနေသောသွားများ သည် ကျိုးသည့်သွားထက် များနေလျှင်ကုရ်ဘာနီ ပိုင်၏ ။ (ဒွရ်ရေ့မွခ်သာရ်ကျမ်း၊ တွဲ -၅၊ စာ - ၃၂၂)
၁၁. မွေးရာပါ နားရွက်မပါသော သားကောင်အား ကုရ်ဘာနီ ပြုခြင်း မပိုင်။ အကယ်၍ နားရွက်သည် သုံးပုံတစ်ပုံ (သို့မဟုတ်) သည့်ထက်ပိုပြီး ပြတ်နေပါ ကလည်း မပိုင်ပေ။ သို့သော် မွေးရာပါနားရွက်ပါပြီး အနည်းငယ်သေးနေပါက ကုရ်ဘာနီ ပိုင်သွားသည်။ (ဒွရ်ရေ့မွခ်သာရ်ကျမ်း၊ တွဲ - ၂၊ စာ -၃၂၂)
၁၂. မွေးရာပါဦးချိုမပေါက်လာသော (သို့မဟုတ်) ဦးချိုကျိုးနေသော သားကောင်အား ကုရ်ဘာနီ ပြုပိုင်၏ ။ သို့သော် ဦးချိုသည် အမြစ်မှကျိုးသွားမည်၊ (သို့မဟုတ်) ကျွတ်သွားမည်။ ၄င်းနောက်ထိုကျိုးသော နေရာမှဒဏ်ရာဒဏ်ချက်သည် ဦးနှောက်ထိတိုင်ရောက်ရှိသွားသော် ယင်းသားကောင်အား ကုရ်ဘာနီ ပြုခွင့်မရှိတော့ပေ။ ( ဖသ၀ါရဟီမီကျမ်း၊ တွဲ - ၆၊ စာ - ၁၆၁)
By Hay Shan
Posted by Ordinary person at 3:20 PM No comments:
Muslims throughout the world have extremely high standards of personal hygiene, because Islam places great emphasis on both physical and spiritual, cleanliness and purification. While humankind in general usually considers cleanliness to beapleasing attribute, Islam insists on it. Muslims are required to take care of their personal hygiene by assuring that they are well groomed, and that their bodies, clothing, and surroundings are clean. Prophet Muhammad, may the mercy and blessings of God be upon him, informed his companions and thus all of us, about the importance of cleanliness when he said, “cleanliness is half of faith.” The Quran is more specific and says,
“Truly, God loves those who turn unto Him in repentance and loves those who purify themselves.” (Quran 2:222)
Personal hygiene is desirable at all times but certain aspects of personal hygiene are not only important but also compulsory. According to scholars, cleanliness is of three kinds, purification, or ritual washing in order to perform prayer; keeping the body, clothing, and environment clean; and specifically removing the dirt or grime that collects in the various parts of the body, such as teeth, nostrils, under the nails, in the armpits and around the pubic area.
The Arabic word for purity is tahara and it means to be free from filth, both spiritual and physical. Purity is the key to prayer. Spiritual taharah means being free from sin and idolatry and denotes believing in the Oneness of God. It is as important as physical cleanliness. Beforeaperson stands before God in the special connection that is prayer, he must ensure that his heart is free from sin, arrogance, and hypocrisy. Once this is accomplished, or at least greatly desired, he is able to cleanse himself from physical impurities. This is usually achieved by using water.
“O you who believe! When you intend to offer the prayer, wash your faces and your hands (forearms) up to the elbows, wipe your heads, and (wash) your feet up to the ankles. If you are inastate of Janaba (i.e. hadasexual discharge) purify yourself.” (Quran 5:6)
Prior to obligatory or voluntary prayeraperson must assure that he is inastate of cleanliness, he does this by performing either wudu (often translated as ablution) or ghusl (a full bath). Wudu rids the body of minor impurities, and ghusl cleanses the body of major impurities. Ghusl must be performed after sexual intercourse or any sexual activity that releases bodily fluids. Ghusl is also performed at the completion ofawoman’s menstrual period or post partum bleeding.
Ritually cleansing the body by performing wudu includes washing the hands, rinsing the mouth and nose, washing the face, washing the arms up to the elbows, wiping the head (and beard), washing the ears, including behind the ears and washing the feet up to and including the ankle. A person does not have to repeat this ablution for every prayer unless he has broken his wudu by one of the following methods; urinating or defecating, breaking wind, eating camel meat, falling asleep while lying down, losing consciousness, directly touching the genital area or becoming sexually excited sufficiently to emitadischarge.
In the traditions of Prophet Muhammad, may the mercy and blessings of God be upon him, we are told that on the Day of Judgement those who completeaperfect wudu will be identifiable by the light shinning from the areas washed in wudu. Prophet Muhammad also taught the believers to perform wudu in an environmentally friendly manner. Water was often scarce and he recommended using as little water as necessary to complete the wudu correctly. However, on certain occasions it was obligatory to takeafull bath (ghusl), at which time water touches all parts of the body.
Under certain conditions, ritual purification can be achieved without water. This is called tayammum, or dry ablution. If water is not available in sufficient quantities, or if it would be dangerous to use water, for instance ifaperson was wounded or very ill, clean earth may be used instead. Tayammum is performed by striking the hands lightly over clean earth and then passing the palm of each hand on the back of the other, the dust is then blown off and the hands are passed across the face. These actions are performed instead of wudu or ghusl.
“...But if you are ill or onajourney or any of you comes from answering the call of nature, or you have been in contact with women (i.e. sexual intercourse) and you find no water, then perform Tayammum with clean earth and rub therewith your faces and hands. God does not want to place you in difficulty, but He wants to purify you, and to complete His Favour on you that you may be thankful.” (Quran 5:6)
Although God expects those who worship Him to be ritually clean, He is Merciful and allows certain concessions. He (God) says in the Quran (2:286) that He does not burdenaperson beyond what he can bear. Thus, tayammum is one of the concessions as is wiping over the socks, headscarves, and turbans.
Islam isaholistic religion that takes into account humankind’s need forabalance between physical, emotional, and spiritual health and well-being. Personal hygiene and cleanliness, both physical and spiritual, keeps both the body and mind free from disease. Cleanliness is an important part of the high standards and values that are inherent in Islam.
Ref : http://www.islamreligion.com/articles/2149/
Posted by Ordinary person at 2:39 PM No comments:
လူဟူသော လူ သည် သတိမေ့ခဲ့ပါက ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌အဝတ်အထည်ရှိသော်လည်း မှားယွင်းမှုတို့ကြောင့် ထိုအဝတ်တန်စာများပျောက်ကွယ်သွားသကဲ့သို့ အရှက်ရစေ၍ ဂုဏ်သက္ခါ ကင်းမဲ့သူ ဖြစ်သွားနိုင်သည်။
ပညာရှိသော်လည်း သတိတရားမရှိခဲ့လျှင် မိမိကိုယ်ကို နိမ့်ကျရာသို့ပို့ဆောင်စေနိုင်သည်။
သတိလက်လွတ်ဖြစ်အောင် ရှိုင်သွာန်မိစ္ဆာကောင်မှ လူတို့အား တီးတိုးပြော၍ လှည့်ဖျားသွေးဆောင်ကာ လူသားတို့အား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သော လမ်းကြောင်းမှ သွေဖယ်သွားရန် နှင့် ၎င်းရှိုင်သွာန်၏ မိတ်ဆွေအဖြစ် ငရဲမီးသို့အဖော်ခေါ်ဆောင်သွားရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Iblis said : I will certainly lie in wait for them on Your Straight Path. Then will assault them from before them and behind them, from their right and from their left (7: 14-18)
သမိုင်းကို ပြန်လည်သတိရကြည့်ပါလျှင် ရှိုင်သွာန်မိစ္ဆာကောင်သည် ဘာဘာ အာဒမ် (အ) နှင့် မာမာဟာဝါ (အ) တို့အား လှည့်ဖျား သွေးဆောင်ကာ ဟာရမ် ဟန့်တားထားသော သစ်သီးကိုစားသုံးစေ၍ အရှက် နှင့် သောက တို့ကို ရစေခဲ့သည်။
"And O' Adam! Dwell you and your wife in the Garden (of Bliss) and eat therefrom wherever you will but approach not this tree lest you should be: among the wrong-doers." (7: 20)
"Then We said: O' Adam! Verily, this Iblis is an enemy to you and your wife, so let him not get you both out of the Garden so that you are landed in misery." (20: 117)
Finally Satan succeeded in his mission and made them approach that specific tree. Instantly evil consequences appeared. The Holy Qur'an says:
'' When they both tasted of the tree, their private parts became manifest to each other and they both began to cover themselves with the leaves of the trees (in the garden), and their Lord called them saying: Did I not forbid you both from that tree and tell you that Satan was your avowed enemy. They said: Our Lord! We have wronged ourselves. If you forgive us not and bestow not upon us Your mercy, we shall surely be of the losers." (7: 23, 24)
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်၌ ကျိုးနွံစွာ တောင်ဘာဟ်ဖတ်ခြင်း၊ လူအချင်းချင်းအပေါ်ပြစ်မှားမိသမျှကို ပြန်လည်တောင်းပန်ကြခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ အရှက် အနြ္ဒိရေ ဂုဏ်သက္ခါတို့ကိုပြန်လည်ဆယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရှိုင်သွာန်၏ မာနရှိသောသူတို့အဖို့တောင်းပန်ခြင်းသည် လွန်စွာလေးပင်သော အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
မည်သည့် အချေအနေ၌မဆို စိတ်လိုက်မာန်ပါ မဖြစ်မှီ နောင်တမလွန် အာခီရတ်ခရီးကို သတိရကြပါ။ အချင်းချင်းသတိတရားပေးကြပါ။
ဒီနေ့ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှူနေကြသေးသည်မှာ တောင်ဘာဟ်ဖတ်ရန်၊ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးတောင်းပန်ကြရန် အလွန်တန်ဖိုးရှိသောအချိန်ဖြစ်ပေသည်။
မနက်ဖြန် ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်အသက် ရှူနိုင်ကြအုံးမလား ကဖန်ပိတ်စဖြူနဲ့ပတ်ထားပြီလား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်သာ အသိဆုံးဖြစ်သည်။
La hawla wa la kuwata illah billah ကျွန်ုပ်တို့မှာဘယ်အရာမှတတ်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။
Posted by Ordinary person at 3:30 AM No comments:
အတွေးအခေါ်ရင့်ကျက်မှုတွေ၊ အသိတရားတွေ တိုးပွါးလာတယ်။
အသိတရား နဲ့ ပညာကိုဖျက်စီးတာက ဒေါသ နဲ့ မာန်မာန။
မြင်ရတဲ့ မိုင်ယတ်ရယ်၊ တူးထားတဲ့ မြေတွင်းရယ်ပါ။
လူသားအချင်းချင်း ကွဲပြဲကြမလား၊ ညီညွတ်ကြမလား
မိမိတို့၏ ပြည့်ဝသောစိတ် (သို့) မဖွံ့ဖြိုးသေးသောစိတ်တို့က
အမှန်တရားနှင့် နှစ်ဘဝကို ညွန်ပြထားသော ကျမ်းဂန်ကိုမမေ့စေရန်နှင့်
ရှိုင်သွာန်၏ လှည့်ဖျားမှုနွံထဲမှာ မနစ်သွားဘို့က အဓိကဖြစ်တယ်။
ဆွလာသ်ပြုနေသော်လည်း ငါ အတွက်၊ ကောင်းမှုပြုသော်လည်း ငါ့ အတွက်၊
တစ်စုံတစ်ရာ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ဒေါသမီးတို့နှင့် ငါ ဆို တဲ့ ငါ
အရှင့်အတွက်စေတနာနှင့် ဝတ်ပြုသော ဆွလာသ်၊ လူသားချင်းထားရမဲ့ တာဝန်များ
မျက်ကွယ်ပြုပြီး အရိုင်းခေတ် နောက်ပြန်ဆုတ်နေပြီလား
Posted by Ordinary person at 4:01 AM No comments:
မြန်မာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ၏ ဘာသာရေး နိုင်ငံရေးနှင့် သမိုင်း အကြောင်း သိကောင်းစရာ (75 days in bangkok part 3)
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် များသောအားဖြင့် ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၊ ထိုင်းမွတ်စလင်မ်များနှင့် ထိုင်းတရုတ်များ တစ်လမ်းတည်းနေထိုင်ကြသည်။ တစ်လမ်းတည်းနေကြသော်လည်း ဘာသာရေး ပဋိပက္ခမဖြစ်ကြပါ။ တစ်လမ်းတည်းမှာဘဲ ထိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊၊ မွတ်စလင်မ်ဗလီများ၊ တရုတ်ဘုံကျောင်းများနဲ့ စည်ကားလျှက်ရှိကြပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လူအချင်းချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေထိုင်ရာတွင် ထိုင်းမွတ်စလင်မ်တို့သည် အခြားဘာသာများနှင့်တန်းတူနေထိုင်နိုင်ကြသည်မှာ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် အံ့ဩစွာတွေ့ရှိရပါသည်။
လွန်ခဲ့သော ၁၄ ရာစုနှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မလေးရှားကုန်သည်များရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အီရန်နိုင်ငံမှ ကုန်သည်များ၊ ဗီယက်နမ်မှ မွတ်စလင်မ် စစ်သားများ၊ ဂျာဗားကျွန်းစွယ်မှမွတ်စလင်မ်များနှင့် တရုတ်မွတ်စလင်မ် စစ်သည်များ သည်ရေကြည်ရာမြက်နုရာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများအဖြစ် ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ မွတ်စလင်မ်အများစုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် ယနေ့ထိတိုင် နေထိုင်ကြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မွတ်စလင်မ်လူဦးရေ ၆ သန်း ရှိပြီး ထိုင်းလူဦးရေ ၆၃ သန်း မှ ၁၀ ရာခိုင်နှုံးရှိသည်။
ပထမဦးဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မွတ်စလင်မ်
ဆုခိုထိုင် ဘုရင်နန်းဆက်မတိုင်ခင် မူလမလေးရှားမှ အစ္စလာမ်သာသနာသည် ထိုင်းတောင်ပိုင်း ပတ္တနီ နယ်မြေမှ တစ်ဆင့် နာရာထိဝတ်၊ ယာ့လာ၊ စသူန် နှင့် စွန်ကလာမြို့များသို့ ပြန့်နှံ့ခဲ့သည်။ စင်စစ် ထိုကာလ၌ ထိုင်းတောင်ပိုင်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့် မလေးတို့ ၏ အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ။ ပတ္တနီ စူရတန်မင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့သောနယ်မြေဖြစ်သည်။
၁၇ ရာစုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပါရှန် ကုန်သည်များသည် ဆယာမ် နိုင်ငံသို့ (ယခင်ထိုင်းနိုင်ငံကို ဆယာမ်ဟုခေါ်သည်) ရေလမ်းခရီးနှင့်ရောက်ရှိလာကြပြီး ကျောက်ဖရယား မြစ်ကမ်းနား တစ်ဖက်ခြမ်းရှိ ထွန်ဘူရီတွင် အခြေဆိုက်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
၁၉ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင် ဂျဗားကျွန်းစွယ်မှ မွတ်စလင်မ်များသည် စီးပွါးရေးအရ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်ကာလသည် ကျူလာလွန်ကွန် ဘုရင် (လက်ရှိထိုင်းဘုရင် ဘူမိဘောလ် အဘ်ဒူလ်လရာဒေ့ခ်ျ၏ ဘိုးတော်) လက်ထက် (မြန်မာနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်သို့ကျဆုံးချိန်ကာလ) ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၏ စီးပွါးရေးမှာ ဂျာဗားအင်ဒိုများထက် ပို၍တိုးတက်မှုရှိသောအချိန်ဖြစ်သည်။
ကဗ္မောဒီးယား - ဗီယက်နမ် ရှမ် ဒေသမှ မွတ်စလင်မ် စစ်သည်များ
စထုတ္တအုပ်စုမှာ အီကသိုစရွတ် ဘုရင်မင်းလက်ထက်တွင် ၎င်းစစ်သည်များသည် ဆယာမ် (ထိုင်း) စစ်တပ်နှင့်စစ်တိုက်ပေးခဲ့ရသည်။ ထိုင်းဘုရင် ကျူလာလွန်ကွန်မင်း လက်ထက်တွင် ကဗ္မောဒီးယား - ဗီယက်နမ် ရှမ် ဒေသမှ မွတ်စလင်မ်များသည် ကျောက်ဖရယားမြစ်မှတစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
အာရှတောင်ပိုင်း မှ ကုန်သည်များ
အာရှတောင်ပိုင်းမှ အန္ဒိယ၊ ဘင်းဂ္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ပါကိစ္စတန် နှင့် အာဖဂန်နိစ္စတန်တို့မှ ဖြစ်ပြီး သမိုင်းအထောက်အထားများအရ အန္ဒိယမွတ်စလင်မ် ကုန်သည်များသည် ကြွယ်ဝသူများဖြစ်ကြပြီး အယုထယာမြို့တော်တွင်နေထိုင်ကြပြီး မူလအရပ်သူများနှင့် အိမ်ထောင်ပြုပြီး စီးပွါးရေးများကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ တရုတ်ပြည်တွင်လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သောအခါ Chiang Kai-shek ၏ ကူမင်တန်တပ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ခိုလှုံခဲ့သည်။ Chiang Kai-shek ၏စစ်သည်အများစုမှာ Hui တိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏စစ်လေယာဉ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင်မြို့ မဲ့စလောင်းဒေသတွင်ယခုထိရှိနေပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မွတ်စလင်မ် သာသနာရေးဝန်ကြီးရှိပါသည်။ မွတ်စလင်မ် သာသနာရေးဝန်ကြီးကို ကျူလာလာ့ခ်ျမွန်သရီဟုခေါ်ပြီး မွတ်စလင်မ်တို့၏မဲပေးမှုနှင့် အရွေးခံရသူဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပထမ မွတ်စလင်မ် သာသနာရေးဝန်ကြီးမှာ Sheik Ahmad Qumi ဖြစ်သည်။
Sheik Ahmad Qumi သည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရှီယာ မွတ်စလင်မ် ကိုယူဆောင်လာသူဖြစ်သည်။ ထိုင်းဘုရင် စွန်သမ် လက်ထက်တွင် ဆယာမ်၏ တရားရုံးကို ကြီးကဲအုပ်ချုပ်ခဲ့သောကြောင့် ဘုရင်၏နှစ်သက်ကျေနပ်မှုရကာ ကျောက် ဖ ရ ယာ ဝန်ကြီးဆုကိုချီးမြင့်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
အန္ဒိယမျိုးနွယ် ဒေါက်တာ ဆူရင် ဖစ်ဆူဝမ် သည် ထိုင်းတောင်ပိုင်း နခေါ်န် စရီထမရတ်မြို့သားဖြစ်ပြီး Harvard University မှ political Science M.A နှင့် Phd ဘွဲ့များကို ၁၉၇၄ နှင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ်ကရယူခဲ့သည်။ သူသည် ထိုင်းဒီမိုကရက်ပါတီဝင်ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရေးတွင် အရေးပါသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အခု ဒေါက်တာ ဆူရင် ဖစ်ဆူဝမ်သည် လက်ရှိ အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်။
ဝမ်းမူဟာမတ် နော်မထာသည် ထိုင်းတောင်ပိုင်း ပတ္တနီမြို့သားဖြစ်ပြီး အလွန်သစ္စာရှိသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း၊ အခြား ထိုင်းလွှတ်တော် အမတ်များကဲ့သို့ ငွေနှင့် ဝယ်ယူလို့မရသော လေးစားစရာကောင်းသော လူကောင်းတစ်ယောက်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်ဆင် ရှင်နဝပ်ကချီးကြူးခဲ့ပါသည်။ ဝမ်းမူဟာမတ် နော်မထာသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး နှင့် ထိုင်းပါလီမန် ဥက္ကထ အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ကုန် စားကုန်များကို ဝမ်းမူဟာမတ် နော်မထာ ၏ အားပေးမှုဖြင့် ဟာလာလ် အမှတ်တံစိပ်တပ်ဆင် ပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်ပသို့မြောက်များစွာ ရောင်းချရသည့် အတွက်ကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ထိုင်းနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများခံစားရသည်။
ပါရှန်မျိုးနွယ် ထိုင်းမွတ်စလင်မ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စွန်ထိ ဘူယာရတ်သကရင် သည် Sheik Ahmad Qumi ၏မျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်ဆင်အား ၂၀၀၆ ခုနှစ်က အဓမ္မ လာဘ်စားမှုမှဖယ်ရှားခဲ့သူဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုင်းစစ်တပ်တွင် မွတ်စလင်မ်စစ်သည်များ၊ စစ်ခေါင်းဆောင်များသည် ထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်တန်းတူ ဂုဏ်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ထိုင်းဘုရင်မိသားစုနှင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့သော အစိုးရတိုင်းသည် ထိုင်းမွတ်စလင်မ်များအား များသောအားဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးတန်းတူပေးသည်။ အစ္စလာမ်သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်ရေးကို အစိုးရဖက်မှ ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။
ထိုင်းဘုရင် နန်းတက် စဉ်က ပြောခဲ့သော သစ္စာစကားမှာ '' တိုင်းပြည်ကို တရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်မည် '' ဟူ၏။
ထိုင်းတောင်ပိုင်း Patani Region
သည်နေရာမှာ စာဖတ်သူများအနေနှင့် ထိုင်းတောင်ပိုင်း၏ မငြိမ်သက်မှုများကိုထောက်ပြနိုင်ပါသည်။
သမိုင်းစင်စစ်မှာ ယခင် ပတ္တနီ (တောင်ပိုင်းပြည်နယ် ၅ ခု ပါဝင်) သည် ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့် မလေးတို့ ၏ အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း၊ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးအချက်ကျ စူရတန်မင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ လီဂေါ စူရတန်ဘုရင်၏ နန်းတော်ဟောင်းသည်ဒီနေ့ထိတိုင် ပတ္တနီ တွင်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ကျူလာလွန်ကွန် ဘုရင်၏စစ်တပ်အင်အားနှင့် ပတ္တနီ ဘုရင့်နန်းတော်သို့ဝင်ရောက်၍ ပတ္တနီဘုရင်အား ထို ၅ ပြည်နယ်လုံးကို ထိုင်းဘုရင်ပိုင်အဖြစ်လွှဲအပ်ပေးရန် စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့သည်။ ပတ္တနီဘုရင်က မလိုက်နာခဲ့၍ နယ်မြေမလွှဲပေးပါက ပတ္တနီဘုရင်အားကွက်မျက်မည်ဟု အင်အားနည်းသူအား အကျပ်ကိုင်ခဲ့သောကြောင့် ပတ္တနီဘုရင်မှာ ပြည်နယ် ၅ ခုကို လွှဲပေးခဲ့ရပါသည်။
ထို့နောက် ဘုရင်နှင့် တောင်ပိုင်းသားများကို ထိန်းချုပ်၍ ဘန်ကောက်မြို့သို့ခေါ်လာပြီး ပတ္တနီယဉ်ကျေးမှု၊ အစားအသောက်နည်းပညာ အနုပညာများကို ထိုင်းလူမျိုးများကို သင်ခိုင်းခဲ့သည်။ ကျူလာလွန်ကွန်ဘုရင် ကွယ်လွန်သောအခါ ထိုင်းလူမျိုးများသည် ကျူလာလွန်ကွန်ဘုရင်အား ဒီနေ့ထိနတ်အဖြစ်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။
စီးပွားရေးတိုးတက်ခဲ့သော Patani region သည် ထိုင်းနိုင်ငံလက်အောက်သို့ရောက်ပြီး စည်းပွါးရေး၊ ပညာရေးများ ဆုတ်ယုတ်နစ်နာ ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး ပြည်သူများမှာ ဆင်းရဲလာခဲ့လေသည်။
ထိုင်းအမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားသော ထိုင်းအစိုးရများက တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များတွင် တောင်ပိုင်းမွတ်စလင်မ်တို့ ကိုယ်ပိုင်စကားဖြစ်သော ယာဝီ စကားသုံးစွဲမှုကို အတင်းပိတ်ပင်၊ ထိုင်းစကားကို မသင်မနေရပြဌာန်း၊ သာသနာ့ကျောင်းတွေကို ပိတ်ခိုင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အခြားနယ်တို့မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ထိုင်းလူမျိုးထောင်သောင်းများကို တောင်ပိုင်းကို အမိန့်နှင့် နေရာချထား၊ ထိုသို့ မလုပ်ဖို့ကန့်ကွက်သော တောင်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များကို သေဒဏ်ပေး၊ စသည်ဖြင့်တို့ကို လုပ်နေသော ထိုင်းဗဟို အစိုးရတွေ မျက်စိမှိတ်နေခဲ့ပါသည်။
ထိုင်းအစိုးရမှာ အမေရိကန်နောက်လိုက်ဖြစ်ပြီး ငွေ အတွက် အမေရိကန် ခိုင်းသမျှအကုန်လိုက်နာသူများဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်လက်ထက်တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသူ ရိုစာ ဥပုသ်စောင့်ထိန်းနေသောမွတ်စလင်မ် ၇၈ ယောက်ကိုဖမ်းစီးပြီး စစ်တပ်ကားနှင့် ထိန်းသိမ်းရာစခမ်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားရာ လမ်းတွင် မွတ်စလင်မ်များအသက်ရှူ ကြပ်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သက်ဆင်သည် အမေရိကန် Bush အစိုးရနှင့်မဟာမိတ်ဖြစ်သည်။ မိမိအာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ဥပဒေကို ပြောင်းရေးသူဖြစ်သည်။
အခုခေတ်ပို၍ဆိုးလာသည်မှာ ထိုင်းတောင်ပိုင်း မွတ်စလင်မ်များ ဆွလာသ်ဝတ်ပြုရာ ဗလီကျောင်း အနီး၌ ထိုင်းဘာသာခြားအရင်းရှင်မှ အရက်ဆိုင်ဖွင့်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကို ဗလီဝတ်ကျောင်းနှင့်ကလေး သူငယ်များနှင့်နီး၍ မသင့်တော်သောကြောင့် အရက်ဆိုင်ကိုဖယ်ရှားပေးရန် ထိုင်းမွတ်စလင်မ်များမှ ငြိမ်းချမ်းစွာအဖန်ဖန် တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း အဓမ္မလဘ်လိုက်စားသော ဘာသာခြား အစိုးရအမှုထမ်းများ၏ ဥပြစ်ခါပြုမှုကိုခံခဲ့ရသည်။
ထိုင်းတောင်ပိုင်း၌ဖြစ်ပေါ်နေသော မတရားမှုများကို ထိုင်းမီဒီယာ နှင့်အစိုးရမှ ဖုံးဖိထားကြပြီး တောင်ပိုင်းသားများ၏ပေါက်ကွဲမှု၊ မိမိတို့ နယ်မြေကို မတရားအသိမ်းပိုက်ခံထားရမှုမှ လွတ်လပ်စွာကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေးတောင်းဆိုမှုများကို သောင်းကြမ်းသူများအဖြစ် ထိုင်းမီဒီယာမှဖော်ပြခဲ့သည်။ မတရားမှုကို အာဏာပိုင်များမှပိတ်ပင်ထားရာ ထိုင်းတောင်ပိုင်းသားများမှာ ပို၍သာပေါက်ကွဲကုန်သည်။
* ကမ္ဘာပေါ်တွင် ညစ်ပတ်ယုတ်မာသောနည်း နှစ်နည်း ရှိပါသည်။ လူသိသူသိ လူမိုက်လို ယုတ်မာနည်းနှင့် ပညာရှိလို လူသူမသိစေပဲ စနစ်တကျယုတ်မာနည်းဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယနည်းက ပိုကြောက်စရာကောင်းပြီး ကြောင်သူတော်နည်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာလူမျိုးများတွင် ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုသူများ အဖမ်းခံ၊ အသတ်ခံခဲ့ရပြီး
ထိုင်း - မြန်မာ နယ်စပ်တွင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများရှိသလိုထိုင်းတောင်ပိုင်းတွင်
အခု ဥပဒေကို ဦးစားပေးသော ဝန်ကြီးချုပ် အဘိစစ် ဝေ့ဂျာချီဝပ်လက်ထက်တွင် ထိုင်းတောင်ပိုင်းသားများနှင့် ပိုမိုရင်းနှီးရန် ကျိုးပမ်းခဲ့သည်။ ထိုင်းအစိုးရမှ တောင်ပိုင်းသားများအား အားပေးကျော်ငြာသည်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံသားအားလုံးသည် မည်သည့်အရပ်ဒေသကပင်ဖြစ်စေ ကျောသား ရင်သားမခွဲခြားဘဲ ညီအစ်ကို မောင်နှမများဖြစ်သည် ဟူ၏။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မည်သည့်အစိုးရဘဲတက်တက် သိမ်းပိုက်ထားသော တောင်ပိုင်းကိုတော့ ပြန်ပေးရန်အစီအစဉ်မရှိပါ။
အထက်ပါအချက်များသည် ထိုင်းနိုင်ငံရေး နှင့် သမိုင်းများ ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အဆိုး အကောင်းနှစ်မျိုးစလုံးကို သိမြင်ရသည်။
ထိုင်းပြည်သူများသည် ထိုင်းမွတ်စလင်မ်များကို မြန်မာအစိုးရကဲ့သို့ ဧည့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ဟူ၍သော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာလူမျိုးများကဲ့သို့ ကုလားဟူ၍ သော်လည်းကောင်း မနှိမ်ကြပါ။ ၎င်းတို့အမြင်မှန်ရှိသည်မှာ ၎င်းတို့ကိုးကွယ်သောဘုရားသည် အန္ဒိယနိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဟူ၏။
ထိုင်းလူမျိုးများသည် မွတ်စလင်မ်များအပေါ် အမြင်ကျည်းမြောင်းမှုများ၊ တချို့မြန်မာ brutal dictator များကဲ့သို့ အွန်လိုင်းတွင်အောက်တန်းကျစွာ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ထိခိုက်စော်ကားခြင်းမပြုကြ၊ အာဃာသများ မကြီးကြ၍ ထိုင်းမွတ်စလင်မ်အများစုမှာ ဒီနေ့ထိတိုင် လူ့အခွင့်အရေးတန်းတူရရှိပြီး အေးဆေးစွာနေထိုင်နိုင်ကြသည်မှာ အလွန်ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၆၀ နောက်ပိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံကဲ့သို့ မွတ်စလင်မ် ဝန်ကြီးများမရှိတော့ပါ။ ဤသည်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်သော်လည်းစိတ်ဓါတ်ရေးအရ ကွာခြားမှုများကို ထင်ရှားစွာတွေ့ရပါသည်။
Posted by Ordinary person at 2:17 AM2comments:
Labels: 75 days in Bangkok
အွန်လိုင်းသောင်းကြမ်းသူများအတွက်... ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက်
လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကို ဗဟိုပြုပြီး ကိုယ့်လူမျိုးသည်မှ အမှန်အကန်ဆုံး အမြင့်မြတ်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်မြင်သူ၊ လူမျိုးနွယ်ခြား၊ အယူခြား၊ ဘာသာခြားများအား မလိုတမာ ရန်ရှာ မျက်မုန်းကျိုးတတ်သူ- လူစားမျိုးကို Racist (မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒီ)လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ Racist တွေဟာ အခြားလူမျိုးနွယ်-မိမိအယူမှအပ အခြားသူ၏ အယူအဆများ ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း အမြဲကြံစည်နေတတ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ သွေးသားလည်ပတ်မှုထဲမှာ လူမျိုးရေးမုန်တီးမှုတွေ စီဆင်းလည်ပတ်နေလေ့ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အဲ့ဒီလို အခြေခံစိတ် ရှိတဲ့လူတွေဟာ- ပညာသင်သော်လည်း စစ်မှန်တဲ့ပညာကို တတ်မြောက်နိုင်တဲ့အင်အား၊ ကမ္ဘာရပ်ရပ်ကို လျှောက်လည်သော်လည်း မှန် ကန်တဲ့ အမြင်နဲ့ ဗဟုသုတ အသွယ်သွယ်ကို လက်ခံရယူနိုင်တဲ့အင်အား- သတ္တ၀ါတွေကို မေတ္တာထားပါလို့ ကိုယ်တိုင်ရေရွတ်နေသော် လည်း မိမိလူမျိုးမှအပ အခြားသူများကို မေတ္တာထားရမယ့် သတ္တ၀ါတွေလို့ သိမြင်ခံစားနိုင်တဲ့ အင်အားများ ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီး နေသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက- ဒီလို လူမျိုးတွေမှာ အာဏာရှင်စိတ် သို့မဟုတ် ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းစိတ်တွေ ကိန်းဝပ်နေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မိမိ ဘက်က အနိုင်ရမယ်ထင်ရင် အကြီးအကျယ် မိုက်ဂုဏ်ကို ပြလေ့ရှိပြီး- မျက်နှာထောက်ထား သနားညှာတာစိတ် မရှိ- လူမျိုးငယ်များရဲ့ လူမမယ် ကလေး တွေကိုပါ မျိုးတုံး သတ်ဖြတ်တတ်တဲ့ အကျင့်ထိ ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို စိတ်နေစိတ်ထား ရှိတဲ့ လူမျိုးထဲက အာဏာ ရလာရင် သူဟာ အင်မတန် ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ အာဏာရှင် Brutal Dictator ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
တိုင်းပြည်တစ်ပြည် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတစ်ခုမှာ Brutal Dictator တွေ ဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်နေရင် အဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်မျိုးမှာ Flag Waving လို့ ခေါ်တဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်ဝါဒီတွေ များလို့လို့ ပညာရှင်တွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေမှာ xenophobia လို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံခြားမုန်း ရောဂါမျိုးလည်း စွဲကပ်နေလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် မိမိ၌ မရှိသွေးကြီး ရောဂါ စွဲကပ်နေခြင်း ဖြစ်ပတယ်။ ဒီလိုတိုင်းပြည် မျိုးမှာ ရှိတဲ့ လူနည်းစု မျိုးနွယ်တွေ၊ လူနည်း သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာတရား အောက်က လူသားတွေဟာ အင်မတန် ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ပေါ်လစီတွေ၊ လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှု ဖန်တီးချက်တွေအောက်မှာ မချိတင်ကဲ ခံစားရလေ့ ရှိပါတယ်။
ဒီလို တိုင်းပြည်မျိုးမှာပဲ- တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ လူသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းမျိုးလည်း ပေါ်ထွန်းတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ လိုပေါ်ထွန်းလာတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ သို့မဟုတ် သူတို့ရဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ် မိရိုးဖလာထဲက ရုန်းထွက်လာတဲ့ လူသားတွေဟာ- အင်မတန် မာကျောတဲ့ ကျောက်တောင်ကျောက်ခဲထုကို ထိုးဖေါက်ထွက်လာရတဲ့ သဘောကြောင့် အရည်အသွေးများ ပိုမို တောက်ပြောင်လေ့ရှိ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေများရေနိုင်- မီးများမီးနိုင်ဆိုတော့- အမှောင်ထုကို ထိုးဖေါက်မယ့် အင်အားက အမှောင်ထုထက် ပိုပြီး ကြီးမားမှ ထိုးဖေါက်နိုင်မှာပါ။
အလွန်တရာ ပွင့်လင်းလာပြီး၊ ကမ္ဘာ့ဒေသ တစ်ခုတစ်ခု ဘာတွေလုပ်နေတယ်။ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေတယ်- ဆိုတာတွေကို ဖုံးဖိထား လို့ မရနိုင်တော့တဲ့ ဒီခေတ် ဒီကမ္ဘြာ့ကီးမှာတော့ ဒီလိုတိုင်းဒေသက လူတွေဟာ အရှက်ကွဲ အကျိုးနဲလာရပါတော့တယ်။ လူရာမ၀င်- လူမသတီစရာ ဖြစ်လာရပါတော့တယ်။လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း တစ်ခုမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ အာဏာကို စွဲကိုင်ထားလို့ အာဏာစက်နဲ့ ရမ်းချင်တိုင်းရမ်း နေတာကို လူထုက မတတ် နိုင်ပေမယ့်- လူထုကိုယ်တိုင်က ဘာအာဏာမှ မရှိဘဲ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းစိတ်တွေ ရှိနေရင်- အဲ့ဒီ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း ရွံရှာစရာ အသိုင်း အ၀ိုင်း ဖြစ်တယ်လို့- ကမ္ဘာ့လူယဉ်ကျေးတွေက သတ်မှတ်လာပါတယ်။ "အမိယုတ်တော့ ကြမ်း။ အဖယုတ်တော့ ရမ်း" ဆို တဲ့ မြန်မာ စကားပုံလို လူအသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုက လူတွေမှ ကြမ်းတမ်း ရမ်းကား နေသူ များရင် အဲ့ဒီ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ မျိုးရိုးဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ ထိ ခိုက်ရပါတော့တယ်။
ဒီအခြေအနေမှာ- မိမိလူမျိုး-မိမိတိုင်းပြည်ကို အရှက်ကွဲရခြင်းက လွတ်မြောက်လိုသူတိုင်းက ယုတ်မာရမ်းကား နေသူအားလုံးကို ရတဲ့ နည်းနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းတော်လှန်ဘို့ လိုပါတယ်။ ယုတ်မာရမ်းကားမှုကို လွှတ်ပေးထားရင် သို့မဟုတ် မသိကျိုးကျွံပြုထားရင် အဲ့ဒီလူဟာ မိမိ တိုင်းပြည် မိမိလူမျိုးအတွက် တာဝန်မကျေ ဖြစ်ရပါမယ်။ မိမိတိုင်းပြည် မိမိလူမျိုးရဲ့ အရှက်သိက္ခာကို မစောင့်ရှောက်သူ- သို့မဟုတ် တစ် ကိုယ်ကောင်းဆန်သူ ဖြစ်ရပါတော့မယ်။ အချို့ကလည်း- တဘက်မှာ လူကြီးလူကောင်းဟန်ဆောင်တယ်။ နောက်တစ်ဘက်မှာ သူ့နှလုံးသားက အမုန်းရောဂါကို မကုသနိုင်ဘူး- ဒီတော့ ဗြောင်မိုက်- ဗြောင်ရမ်းတဲ့ အာဏာရှင်တွေကို မထောက်ခံသလိုနဲ့- အမည်မပေါ်တဲ့နည်းတွေနဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချီရေးနည်း စနစ်တွေကို သုံးပြီး မိမိနဲ့ အယူမတူသူတွေ၊ လူမျိုးနွယ် အငယ်တွေ-ဆန့်ကျင်မုန်းတီးရေး စာတွေ ဖြန့်ချီပါတော့တယ်။
တကယ်တော့ အဲ့ဒီလို လုပ်ရပ်မျိုးဟာ စော်ကားခံရသူကို မသင့်ပဲ- ကိုယ့်အမှု ကိုယ့်ပတ် ဖြစ်လာရပါတော့တယ်။ စော်ကားခံရတဲ့ လူမျိုး ဆိုတာ- ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်- ခုခံကာကွယ်တတ်အောင် ဘက်ပေါင်းစုံက လေ့ကျင့်သင်ကြားလာပါတော့တယ်။ စော်ကားခံရတဲ့ လူမျိုးတွေ သာ အရည်အချင်းတွေ မြင့်မာလာပြီး- စော်ကားခြင်းအမှုကို ပြုနေသူတွေဟာ သူ့ဒေါသနဲ့သူ မောဟိုက်လာတော့မှာ ဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီလို အမည်မဖေါ်လိုသူ ကုပ်ကမြင်း သတ္တိရှင်တွေဟာ အင်တာနက်တွေမှာ ဆိုလည်း IP ဖွက်ပြီး cbox တွေမှာ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် စာပို့ တာမျိုး- စတဲ့ အမျိုးသိက္ခာမထောက်၊ သူခိုးဇာတိပြတာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘယ်အရာတွေ- ဘယ်လောက်များ ဖုံးကွယ်ထားလို့ ရလို့လဲ။အခုခေတ်မှာ- အင်တာနက်စာမျက်နှာများက ဘာသာရေးမုန်းတီးမှု။ လူမျိုးရေးမုန်းတီမှုတွေကို ဒီလို ကုပ်ကမြင်းသတ္တိ သို့မဟုတ် သူခိုး သူဝှက် ဗျူဟာတွေနဲ့ ဖြန့်ချီနေတာတွေ ဖေါင်းပွနေပါတယ်။ များသောအားဖြင့်- ဒီလိုအလုပ်မျိုးကို ဇီယွန်ဝါဒီတွေက ကမ္ဘာ့ဘာသာစကား ကြီးတွေနဲ့ ဖြန့်ချီတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို မျက်ကန်းမျိုးချစ်ဝါဒီတွေ ကြီးစိုးတဲ့ တိုင်းပြည်လေးတွေက- မျက်ကန်းမျိုးချစ် အလေ့ပေါက်တွေ က ခိုးချ- အတုယူပြီး ဆက်လက်ဝါဒဖြန့်ချီခြင်းများကို ထမင်းစား ကျွန်ခံ လိုက်လုပ်ပေးနေတာတွေကို တွေ့ရတော့- မိမိတိုင်းပြည်ရဲ့ သိက္ခာအတွက် အလွန်တရာ မျက်နှာပူစရာ ဖြစ်နေရပါတော့တယ်။
သူတို့ လုပ်တာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ဘူး။ သူတို့မုန်းတဲ့ လူမျိုး သူတို့မုန်းတဲ့ ဘာသာဟာလည်း ဘယ်တော့မှ ပျောက်ပျက်သွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာက သိနေတယ်။ စာတတ်သူတိုင်း- အမြင်မှန်ရှိသူတိုင်း သိနေတယ်။ ဒါပေမယ့်- လူတစ်ဘက်သားကို အခြောက်တိုက် မုန်းတတ်တဲ့ အကျင့်- မဟုတ်မတရား ပုတ်ခတ်စော်ကားဝါဒဖြန့်တတ်တဲ့ အကျင့်- တွေ မြန်မာလူမျိုးထဲမှာလည်း ရှိပါကလား ဆိုတဲ့ အဖတ်ဆယ်မရနိုင်တဲ့ သိက္ခကျမှုဒဏ်ကို မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးခံရပါတော့မယ်။
မိမိတို့သည်ပင် မွဲနေ၏၊ တိုင်းသူပြည်သား အများစု ဆင်းရဲတွင်း နစ်နေ၏။ သို့သော် အချင်းချင်း ချစ်ခင် ကူညီရမည်ကို သတိမရ- ဆက် လက် ရန်လိုနေသော၊ ရန်လိုတတ်သော သူများ နေထိုင်ရာ- မွေးဘွားပေးရာ ဇာတိမြေမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်သည်-ဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်အား အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ၏ နှဖူးတွင် ဆိုင်းဘုတ်ဆွဲပေးရန်- ကြိုးစားအားထုတ်နေသော လူယုတ်မာ ကုပ်ကမြင်း သတ္တိရှင်များ၏ မိုင်းဗုံးစက် ကွင်းထဲမှာ မြန်မာပြည်သားများ အားလုံး လွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။
-သြော်- ယိုသူမရှက်၊ မြင်သူရှက်ရပါပကောလား။
Posted by Ordinary person at 11:33 PM No comments:
Release our self
Posted by Ordinary person at 1:33 AM No comments:
မွတ်စလင်မ်အမျိုးသ္မီးတို့ ဘဝလမ်းမှန်ကို ရွေးချယ်လျှောက်လှမ်းရေး။
လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဘာသာမတူ၊ ယဉ်ကျေးမှု မတူသော်လည်း လူအ ချင်းချင်း ရင်းနှီးဆက်ဆံ ပေါင်းသင်းရသည်မှာ ရှောင်ရှားလို့မရပါ။ လူ့အသိုင်းဝိုင်းထဲတွင် အစ္စလာမ်မှခွင့်ပြုထား သော (ဟာလလ်)ရှိသလို၊ အစ္စလာမ်မှ ခွင့်မပြုသော ဟာရမ်များလည်း များစွာရှိပေသည်။
ဤသည်ကို မွတ်စလင်မ်လူကြီးများမှ ကလေးသူငယ်များကို ညွန်ပြရန်၊ သွန် သင်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ တက်သစ်စ မွတ်စလင်မ်လူငယ်များ အနေနှင့် မိမိတို့ကျောင်းနှင့် အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှရ လာသော အရာများကို ဟာလလ်လား ဟာရမ်လားဆိုသည်မှာ သေချာသိနားလည် ရမည်။ အစ္စလာမ်မှ ခွင့်မပြုသော အရာများတွင် နစ်မွန်းနေပါက နှစ်ဘဝလုံး ဆုံးရှုံးနိုင်သည် ကိုသတိချပ်ကြပါ။ အထူးသဖြင့် မွတ်စလင်မ်အမျိုးသ္မီး များ။
အမျိုးသ္မီးများသည် စိတ်နုကြ၏။ ဖြားယောင်း သွေးဆောင်ရန်လွယ်ကူ၏။ အမျိုးသ္မီးများ ဆယ်ကျော်သက်မှ ၂၀ကျော်အရွယ်တွင် အများစိတ်ဝင်စားသော အရွယ်လည်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန် သည် မိန်းကလေးများ၏ စိတ်လှုပ်ရှား – စိတ်ကစားလွယ်သော အရွယ်ဖြစ်သောကြောင့် ဘဝခရီးလမ်းရွေးရာတွင် လမ်းမမှားရန် အထူးဂရုစိုက်ရမည်။
ရင့်ကျက်မှု နည်းနေသေးသော တက်သစ်စ လူငယ်များသည် မထင်မှတ်ဘဲ လူ့အသိုင်း အဝိုင်းထဲတွင် ဓါးစားခံဖြစ်သွားကြပြီး မိမိဘဝတက်လမ်း အညွန့်တုံးခဲ့ရသည့် လူငယ်များမှာလည်း မ နည်းတော့ပါ။
ယခုခေတ်ကာလတွင် ဒုစရိုက်သမားများသည် ကလေးစာသင်ကျောင်းများ၊ လူငယ်တို့၏ အလုပ်ခွင်အနား၊ မိန်းကလေးများ နှစ်သက်သော ကုန်တိုက်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ၎င်းတို့ကိုယ်ကျိုး အတွက် သားကောင်ရှာရန် ကြိုးကွင်းများ အကွက်ဆင်၍ ချထားကြသည်။
လူ့အရိပ်အကဲခတ် မသိတတ်သေးသော ကလေးလူငယ်များကို ဖြားယောင်း သွေးဆောင်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လောင်းကစား၊ လူကုန်ကူးမှုတို့တွင် ပတ်သက်စေခဲ့သည်ကို ကလေးနှင့်မိဘများ လေးနက်စွာ သထိထားရပေမည်။ ထိုလောဘသား တို့၏ကြိုးကွင်းကို စွပ်မိသွားသော ကလေးများကြောင့် မိဘဆွေ မျိုးများမှာလည်း ရင်ကွဲမတတ် ခံစားကြရသည်။
နောက်တစ်ခုက မိန်းကလေးများ အရွယ်ရောက်လာလို့ ရုပ်ရည်ရှိလာလျှင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင် မှတစ်ဆင့်လည်း ကောင်း တက်သစ်စလူငယ်များကို ရှာတတ်သော ကိုယ်စားလှယ်များမှ တစ်ဆင့်လည်းကောင်း၊ အလှပြင်ဆိုင်များမှ လည်းကောင်း မီဒီယာသို့ တွန်းပို့တတ်သည်။
စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်၊ စိတ်ကစားလွယ်သော အရွယ်ကို မီဒီယာသို့ဆွဲဆောင် ရန်သိပ်မခက်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း? မိန်းကလေး သဘာဝသည် အလှအပကြိုက်ကြသည်။ ချိုသာသော စကား များကို လွယ်ကူစွာ ယုံတတ်ကြလို့ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခေတ်စားသော အပြောအဆို၊ အပြင် အဆင်၊ အသွင်မတူ သူငယ်ချင်းများကို ပိုပိုစိတ်ဝင်စား လာတတ်ကြပြီး လူကြီးမိဘများ၏ သွန်သင်ဆုံးမမှုကို ဆင် ခြေအမျိုးမျိုးပေးကာ ကန့်ကွက်လာတတ်ပြီး လမ်းမှားသို့ချော်၍ ရောက်သွားလေ့ ရှိတတ်ကြသည်။ ထို့နောက် မီဒီယာသို့ ခြေလှမ်းရန် သူမတို့မှာလည်း ဝန်မလေးတော့ပေ။
မည်သည့် မီဒီယာမဆို မိန်းကလေးများ၏ အလှဖြင့်ဈေးကွက် ဖန်တီးသော ကြောင့် သရုပ်ဆောင်များကို မလုံ့တလုံ ဝတ်စား ဆင်ယင်စေပြီး အစ္စလာမ်သာသနာနှင့် မအပ်စပ်သော အခြေအနေ သို့ဖန်တီး၍ သရုပ်ဆောင်စေသည်။ ရုပ်ရှင်လောက ထဲရောက်သွားသော မွတ်စလင်မ်အများမှာ များသောအားဖြင့်၊ အီမာန်လျှော့နည်းလာ၍ ဘာသာကိုစွန့်ခွာ သွားကြသည်မှာလည်း မနည်းတော့ပေ။
မိဘဆွေမျိုးများ အနေနှင့်လည်း မိမိတို့၏ သားသ္မီးများ၏ လမ်းမှားကိုဂုဏ် ယူပြီးမနေသင့်။ သားသ္မီးများမှာလည်း ကျေးဇူး ရှင်မိဘများ သောကဖြစ်စေသော အလုပ်များမှ ရှောင်ရှားရပေမည်။ စတားဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော်ကြား တာထက် မိမိကို ဖန်ဆင်းသော ကျေးဇူးတော်ရှင်၏ အမိန့်ကိုနာခံနိုင်ရန် ပို၍အရေး ကြီးပေသည်။ ဒီအတွက်အောက်ပါ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ ဆိုဆုံး မမှုကို မမေ့မလျှော့ နှလုံးသွင်းကြပါ။
“ယုံကြည်သူအမျိုးသမီးတို့အား မျက်လွှာကိုချကြ၊ အရှက်အိနြေ္ဒကို ထိန်းသိမ်းကြ၊ ပေါ်၍နေတတ်သော မိမိတို့၏အလှမှ တ ပါးကျန်အလှအပတို့ကို မဖော်ပြစေရ။ ရင်ဘတ်ပေါ်ဝယ် ခြုံလွှာကို ဆွဲချထားကြ။ မိမိတို့၏ ခင်ပွန်းများ၊ ဖခင်များ၊ သားများ . . . ရှေ့မှတပါး မိမိတို့၏ အလှကို မပြကြရဟု ဆိုလေ။” [ ကုရ်အာန် ၂၄း၃၁ ]
“အို … တမန်တော်၊ သင်၏ဇနီးများ၊ သမီးများနှင့် ယုံကြည်သူ အမျိုးသမီးများအား (အပြင်သို့ သွားလာကြရာမှာ) အပေါ်ရုံကို သူတို့၏ ရင်ဘတ်ပေါ်ဝယ် အနည်းငယ် ချထားကြဟု ပြောကြားပါလေ။ ဤသည် ပိုပြီးသိသာရန် အဆင် ပြေစေ၏။ အလ္လာဟ်ရှင်သည် အလွန်တရာ ခွင့်လွှတ်တော်မူသော အရှင်၊ အလွန်သနား ကြင်နာ ညှာတာ တော်မူ သောအရှင်ဖြစ်၏။” [ကုရ် အာန် ၃၃း၅၉ ]
(ကုရ်အာန်ဘာသာပြန် : ကိုဌေးလွင်ဦး)
ရှိုင်သွာန်သည် လူသားကို အမျိုးမျိုးသွေးဆောင် ဖြားယောင်းနိုင်သည်။ ငွေ၊ အလှအပ ဂုဏ်ပကာသန များပြပြီး အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်များကို မေ့လျှော့စေသည်။ အစ္စလာမ်မှ ခွင့်မပြုသော ဟာရမ်များကို ကျူးလွန် စေတတ်သည်။
လူသားတို့အား ရှိုင်သွာန်၏ လှည့်ဖြားမှုနှင့် မိမိမျက်စိကို ကန်းစေသည်။ ငွေ၊ ဂုဏ်ပကာ သနတို့သည် လောက၌ထာဝရ မမြဲသောအရာ များပင်ဖြစ်သည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား ကြောက်ရွံ့ရိုသေခြင်း၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်များကို နာခံခြင်းနှင့် အီမာန်ခိုင် မြဲ ခြင်းတို့သည်သာ လူသားအပေါင်းကို နှစ်ဘ၀နှစ်ဌာနလုံးတွင် သောကကင်းဝေးစေနှိုင်သော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
မွတ်စလင်မ်ဟူသည် ညီအစ်ကို မောင်နှမများသာဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏ မောင်နှမများသည် လောကီလောကုတ္တရာ နှစ် ဌာနလုံး အတွက် အောင်မြင်မှု အပြည့်ရှိသော အစ္စလာမ်သာသနာ၏ လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း ဘ၀တည်ဆောက်ရေးကို အချင်းချင်းနှိုးဆော် တိုက်တွန်းရမည်မှာ တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
လူသားအဖို့ မြင်တွေ့ရသော ပြင်ပအလှထက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွင်းအလှ က ပို၍အရေးကြီး၏။ ဤသည့် အချက်ကို ကုရ် အာန် ၉၁း ၇မှ၁၀ တွင်–
(ဖန်ဆင်းရှင်သည် (နဖ်စ်)ဟုခေါ်သော စိတ်ညဉ်ကို ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖန် ဆင်းခဲ့သည်။ တဖန် ထိုစိတ်ညဉ်၏ အတွင်းဝယ် မကောင်းမှု ဒုစရိုက်၏အသိကို လည်းကောင်း၊ ကောင်းမှုသုစရိုက် ၏ အသိကိုလည်းကောင်း ထည့်သွင်းပေးခဲ့၏။ စင်စစ်မည်သူမဆိုထို(နဖ်စ်)စိတ်ညဉ်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ပြုလုပ် နှိုင်သူသည် အောင်မြင်လေပြီ။ သို့ရာတွင် ထို(နဖ်စ်)စိတ်ညဉ်၏ အလိုဆန္ဒအတိုင်း မကောင်းမှု ဒုစရိုက်တွင် နစ်မွန်း နေသူသည် ဆုံးရှုံးလေပြီ) ဟုဗျာဒိတ်ထားသည်။
လူသား၏ သဘာဝသည် အကောင်းနှင့်အဆိုးကို ခွဲခြားသိရှိသူ များဖြစ်ကြသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အစ္စလာမ်သာ သနာက ပြဌာန်းထားသော အမိန့်ပညတ်ချက်များ အပေါ်တစ်သွေ မတိမ်းလိုက်နာရင်း လူရှိုင်သွာန်များနှင့် ဂျင်ရှိုင်သွာန်များ၏ ဖြားယောင်းမှုများမှ ကင်းဝေးနှိုင်စေကြောင်း ဆန္ဒပြုလျှက်-
Ref : http://www.quraninburmese.com/blog/2010/10/women-in-islam/
Posted by Ordinary person at 3:48 PM No comments:
Windows7အသုံးပြုသူများအတွက် Microsoft မှ ၄င်း၏အားနည်းချက် တစ်ခုထပ်တွေ့
Microsoft’s security response team မှ မကြာသေးမှီအချိန်တိုအတွင်းမှာ Windows7အသုံးပြုသူများအား blue-screen crashes or code execution attacks ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်သော အားနည်းချက်တစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီအပြစ်က Denial-of Service နှင့် အခြားသော user privileges ဆိုင်ရာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့ VUPEN Security - Vulnerability Research and Intelligence မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်...
ဒီပြဿနာက Clipboard မှ Bitmap Data တွေကို ထုတ်ယူအသုံးပြုစဉ် Win32k.sys ဆိုတဲ့ kernel-mode device driver ဖိုင်ထဲမှ "CreateDIBPalette()" မှ buffer overflow ဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်..
ဒီအပြစ်က Windows 7, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista SP2, and Microsoft Windows XP SP3 တွေမှာလည်း ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်... Microsoft အနေနဲ့ မနေ့က (Tuesday August 10) နေ့ထုတ်လိုက်တဲ့ Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, SQL and Silverlight မှ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ 34 ခုသော vulnerabilities မှာတော့ ဒီ ပြဿနာကို ပြုပြင်ပေးဖို့ MS10-047 - Vulnerabilities in Windows Kernel Could Allow Elevation of Privilege (981852) ကို ထည့်ပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်.. . ဒါပေမဲ့ အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Kernel-Mode driver ရဲ့ buffer overflow ကိုပြုပြင်ပေးနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ordinary person at 4:28 PM No comments:
Complete The Chain Of 1,000,000,000,000s Darood
complete The Chain Of 1,000,000,000,000s Darood-e-Paak.
Billions Blessings on Hazrat Muhammad.
Send it to 10 friends and within an hour it will be written in your registeraBillions Blessings on Hazrat MuhammadAllah willing.
Posted by Ordinary person at 12:44 AM No comments:
Windows7 အတွက် zawgyi keyboard
သိတဲ့သူတွေအတွက် အကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ တော်တော်ကိုခေါင်းရှုပ်စရာပါ..
Windows7 64 bit မှာ zawgyi ကို install လုပ်ပြီး Control Panel\_Reigon and Language\_Keyboards and Languages\_ ကနေ
zawgyi ကို ပြောင်းပေမယ့် ဘယ်လိုမှ မြန်မာဖောင့်ရိုက်လို့မရပါဘူး....
ဒီကောင်လေးကို ဒေါင်းပြီး install လုပ်လိုက်ဗျာ ရိုက်လို့ရပြီ......
ကျွန်တော်တို့လို windows7 64bit နဲ့ zawgyi font ရိုက်လို့မရတဲ့ပြဿနာတက်နေတဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်....
hotfile ကနေ ဒေါင်းလို့အဆင်မပြေသူတွေနဲ့ install လုပ်တဲ့နေရာမှာ ခေါင်းရှုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပါ။
အလွယ်ဆုံးနည်းပါ ဒီအောက်က link ကနေ zawgyi font ကို ဒေါင်းပြီး install လုပ်ပါ...
ပြီးရင် အောက်က တစ်ခုကို ဒေါင်းပြီး install လုပ်လိုက်ဗျာ shift+Ctrl တွဲနှိပ်ပြီး ရိုက်ကြည့်လိုက်တော့ ရပြီ။
Posted by Ordinary person at 11:48 PM No comments:
13.5 Kg Weight Quran-e-Karim Written by Indian Emperor
This Quran is hand-written by Emperor Aurangzeb (RA) nearly 400 years ago. It is 13.5 kg in weight, 39.5 CM long and 20 CM wide. It has Golden and silver colored graving. Every page hasadifferent perfumery smell and to avoid fire accidents the pages are fire proofed.
Police captured the person, M.G. Sukumar (from Kerala), who was trying to sell it for5Crore Rupees.
Indian continent Kerala Police has arrested Mr. M.G. Sukumar (44) resident of Trichur, who is going to sell this Quran for5crores Indian Rupees (IRS.5,00,00,000) equal to 50 million $. And it has been sent to Hyderabad for verification of script.
This Holy Qura'n written by Mughal Emperor AURANGZEB in his own hand writing before 400 hundred years ago (During 1636-44 & 1653-58).
- It's weight measured as 13 KG.
- Size: Length 39.5I cm. and width 20 cm.
- The text was graving with Gold & Silver
- This Qura'n papers are made by fireproof material.
- It's every page giving different type of perfume smell
Special thanks to U Soe Lwin
Posted by Ordinary person at 2:47 PM No comments:
Very interesting findings of Dr. Tariq Al Swaida
That mention one thing is equal to another, i.e. men are equal to women. Although this makes sense grammatically, the astonishing fact is that the
number of times the word man appears in the Holy Qur'an
is 24 and number of times the word woman appears is also 24, therefore not only is this phrase correct in the grammatical sense but also true mathematically,
Upon further analysis of various verses, he discovered that this is consistent throughout the whole Holy Qur'an
See below for astonishing result of the words mentioned number of times
in Arabic Holy Qur'an
Spending (Sadaqah) 73 .
Land = 13/45*100 =
Is thisacoincidence? Question is that Who taught Prophet Muhammed (PBUH) all this?
Reply automatically comes in mind that ALMIGHTY ALLAH taught him. This as the
also tells us this.please pass this on to all your friends
Posted by Ordinary person at 12:00 AM No comments:
Eid al-Fitr 2010
Posted by Ordinary person at 12:35 AM No comments:
75 days in Bangkok part 2
လေယဉ် ၁၂ နာရီ စီးပြီးအင်္ဂါနေ့ ဂျွန်လ ၁ ရက်နေ့မှာ ဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ လေယဉ်ဘီး ဘန်ကောက်မြေပေါ်ချလိုက်တာနဲ့ ခရီးစဉ်ချောမောအစဉ်ပြေတဲ့အတွက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကို သတိရပြီး အလ္လာဟို့အာ့က်ဘား လို့စိတ်ထဲမှာ အဖန်ဖန်ဆိုနေပြီး အလ်ဟမ်းဒို့လိလား ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
လေဆိပ်အတွင်း Immigration counter ကိုသွားနေတဲ့လမ်းတလျှောက်မှာ သစ်ခွပန်းတွေ အနုပညာပန်းချီကားချပ်တွေနဲ့ နွေးထွေးလှပစွာ ကြိုဆိုနေတဲ့ ဘန်ကောက် ဆူဝန်နဖူမ် လေဆိပ်အသစ်ကိုကြည့်ပြီး တစ်မျိုးအမောပြေပါတယ်။ ဆူဝန်နဖူမ် လေဆိပ်က အာရှမှာအကြီးဆုံးလို့ အမည်ပေးထားသလောက် တကယ်လည်းလှပပြီး ခေတ်မှီနေပါတယ်။
လေဆိပ်ကအထွက် highway ပေါ်ကဘန်ကောက်မြို့ကိုကြည့်လိုက်တော့ တိုက်အသစ်တွေနဲ့ တိုးတက်နေလို့ဘဲ။ ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုက တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုပူလာပါတယ်။ Business area တွေမှာ pollution ကပိုများလာတယ်။ လူတွေမှာလည်း စိတ်ဖိစီးမှု နဲ့အလုပ် လုပ် နေကြတုန်းပါဘဲ။ ဘန်ကောက်ကိုရောက်ပြီး မစားရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို အပြတ်စားပြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးက အလွန်ပူတဲ့ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် အစားအသောက်သိပ်မဝင်ခဲ့ပါဘူး။ ရာသီဥတုပူလွန်းလို့ အိပ်လို့မရတဲ့ညတွေလည်းများခဲ့ပါတယ်။
ဗလီနားမှာနေရတာနှစ်သက်တဲ့အတွက် ဘန်ကောက်မှာလည်း ဗလီဘေးမှာနေပါတယ်။
ဒီအတွက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို ရှကုရ်ထပ်ခါလုပ်ပါတယ်။ နေအိမ်ကနေပြီး ဗလီကိုလှမ်းမြင်နေရပြီး မိုးကောင်းကင်ပြာနဲ့ City view ကိုပါမြင်ရလို့တစ်မျိုးကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်။ အိမ်ကနေပြီး တစ်နေ့ ၅ ကြိမ် အာဇံအသံကြားရတာ အရမ်းတန်ဖိုးရှိလှပါတယ်။ အာဇံသံကြားတာနဲ့ ဆွလာ့သ်ဝတ်စုံလေးကိုစွဲပြီး ဗလီကို သုတ်သုတ်လေးသွား၊ မွတ်စလင်မ်အမျိုးသ္မီးတွေနဲ့အတူ ဆွလာ့သ်သွားဖတ်တတ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်က ဗလီခပ်များများမှာ အမျိုးသား အမျိုးသ္မီးဆွလာ့သ်ဝတ်ပြုတဲ့အခန်း သီးခြားစီရှိကြပါတယ်။
အားလပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ အင်တာနက်ဆိုင်သွားပြီး ဘလော့ဂ်အတွက်ဆောင်းပါးတွေရေး၊ ပို့စ်တင်၊ အိမ်နဲ့ဆက်သွယ်တာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ ကျောင်းဆင်းချိန် ညနေ ၃ နာရီကနေ ည ၁၁ နာရီထိလူငယ်တွေ Game ဆော့ကြပါတယ်။ သူတို့ ဆော့တဲ့ Game က စစ်တိုက်၊ ကားပြိုင်တို့များပြီး အချို့ကတော့ အကပြိုင်တဲ့ Game ဆော့ကြပါတယ်။ အင်တာနက်ဆိုင်မှာအသက် ၁၀ နှစ် ကနေ ၁၀ ကျော်သက် ကလေးတွေ Game ဆော့ရင်း နှုတ်ကလည်း လူကြားလို့မကောင်းအောင် ကြမ်းတမ်းဆဲဆိုကြတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့မိဘတွေများ ကိုယ့်သားသမီးကိုဘယ်လို သွန်သင်ဆုံးမထားကြသလဲတော့မသိတော့ပါ။
ဒီမှာ ထိုင်းမွတ်စလင်မ် ကလေးနဲ့ ထိုင်းဘာသာခြားကလေးတွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ခုက အရမ်းကွာခြားနေတာ ထင်ရှားစွာမြင်ရပါတယ်။ ထိုင်းဘာသာခြားကလေးတွေ ကျောင်းဆင်းပြီး အွန်လိုင်းမှာ Game ဆော့ရင်း နှုတ်ကြမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ ထိုင်းမွတ်စလင်မ် ကလေးတွေက အိမ်ပြန်ပြီး ရေမိုးချိုး ကျောင်းကပေးလိုက်တဲ့အိမ်စာလုပ်ကြပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ ဗလီမှာ မဂရိဗ်သွားဖတ်ကြတယ၊် ကုရ်အာန်သင်ယူကြတယ၊် အေရှာဖတ်ပြီးမှအိမ်ပြန်ကြပါတယ်။ မွတ်စလင်မ် ကလေးတွေမှာစာတဘက်နဲ့ကြောင့် ဆော့ကစားကြရင်လည်း ဗလီနားတဝိုက်မှာဘဲဆော့ကြပါတယ်။
ထိုင်းသတင်းစာများက အွန်လိုင်းမှာ အမြဲလို ပြင်းထန်သော၊ အတိုက်အခိုက်ပါသော Game များကို ဆော့တတ်တဲ့ ကလေးများရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို စိုးရိမ်ကြောင်း၊ ၎င်းကလေးများကြီးပြင်းလာပါက လူသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်မှုနည်းပါးပြီး ရာဇဝတ်မှုကို လွယ်ကူစွာကျူးလွန်သူများဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်ရကြောင်းရေးကြပါတယ်။ ထိုင်းအစိုးရဘက်ကလည်း ကလေးများကို အားကစားလိုက်စားရန် အားပေးကြပါတယ်။
ဘန်ကောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာခင်နေတဲ့ ဘလော့ဂါတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ မမီးတို့ဘာသာမတူပေမဲ့လည်း မြန်မာလူမျိုးများအတွက် မေတ္တာရှေ့ထားပြီး ကိုယ့်အလုပ်ချိန် နဲ့ နားချိန်တွေကိုဖဲ့ပြီး ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးများအတွက်အကျိုးရှိစေအောင် တစ်ဘက်တစ်လမ်းကနေပြီး အွန်လိုင်းမှာကော အပြင်မှာပါ ကူညီလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။
75 days in Bangkok နောက်ဆက်တွဲတွေမှာ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေပါလာမှာမို့ စာဖတ်သူများလာရောက်အားပေးကြရန်နှင့် ကွန်မန့်များရေးပေးသွားကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Posted by Ordinary person at 7:33 AM No comments:
အမျိုးသ္မီးများ သောကြာဆွလာ့သ်ဝတ်ပြုရန် တောင်းဆိုလာပါလျှင်
Photo: Masjid Haroom, Bangkok
စူရာဟ်နေစာဟ် အာယသ် ၅၉ ၌ အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်များကိုလိုက်နာကြလေကုန်၊ ထိုနည်းတူစွာရစူလ်တမန်တော်၏အမိန့်တော်များကိုလည်းကောင်း၊ အာဏာပိုင်များ၏ အမိန့်ကိုလည်းကောင်း လိုက်နာကြလေကုန်ဟူ၍မိန့်ဆိုထားသည်။
' အုလစ်လ်အမ်ရီ ' အာဏာပိုင်များဟူသည် မည်သူများနည်း။ ဤတွင်အဆိုကွဲပြားလျှက်ရှိ၏။ အချို့ကတိုင်းပြည်ကို စီမံအုပ်ချုပ်သောအစိုးရများကို ဆိုလိုသည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အချို့က အာလင်မ်ပညာရှိသုခမိန်များကိုဆိုလိုသည်၍လည်းကောင်း၊ အချို့ကတရားသူကြီးများကိုဆိုလိုသည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အချို့က စစ်သူကြီးများကို ဆိုလိုသည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အမျိုးမျိုးယူဆကြသည်။
ကုရ်အာန်ကျမ်းလာ မုက္ခပါဌ်တော်အရ အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်အားအားလုံးကိုလည်း ဆိုနိုင်ပေသည်။ ရှူ-ဂျဆ်ဆွာဆ်
ဆက်၍ထိုအာယတ်တွင်လည်း ဆက်လက်၍မိန့်ဆိုသည်မှာ '' မိမိတို့အချင်းချင်း အငြင်းပွါးသောပြဿနာကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အထံတော်သို့ လွှဲအပ်ချင်းဟူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျမ်းမြတ်နှင့်အညီလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
တမန်တော်မြတ်ထံတော်လွှဲအပ်ခြင်းဟူသည် တမန်တော်မြတ်သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ် တမန်တော်မြတ်ထံတော်ချဉ်းကပ်၍ တမန်တော်မြတ်၏ အမိန့်ဩဝါဒတော်နှင့်အညီလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းကိုလည်းကောင်း တမန်တော်မြတ်ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ပြီးနောက်တွင်မူ တမန်တော်မြတ်၏ ဟာဒီးစ်ဩဝါဒတော်နှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းကိုလည်းကောင်း ဆိုလိုသည်။
ဤသည့်အချက်ကိုထောက်ရှူ့ခြင်းအားဖြင့် အစ္စလာမ်သာသနာတော်တွင် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်နှင့် တမန်တော်မြတ်၏ဟာဒီးစ်ဩဝါဒများသည် အဓိကဖြစ်ကြောင်း အထင်အရှားသိရပေသည်။
အီဂျိဗ်နိုင်ငံ အာလ်အာဇာ တက္ကသိုလ်မှ မုဖ်သီအာဟ်လင်မ်ပညာရှင်များက တညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်နှင့် ဒွိဟသံသယမဖြစ်နိုင်သော တမန်တော်မြတ်၏ ဟာဒီးစ်ဩဝါဒတော်များကိုသာလျှင် တရားဝင်ခိုင်လုံသော ဟာဒီးစ်များအဖြစ်လက်ခံသည်။
A note from the annual int.Islamic conference of Egypt 2009.
Authenticity of the hadiths rely on ”Quran”
”No Hadith isaHadith if contradict with the basic principle of the Holy Quran”
Prof; Dr. Sayed Tantawi
Rector of Al-Azhar University
By brother M.AHNAF
ထို့ကြောင့် အမျိုးသ္မီးများဗလီ၌ ဆွလာ့သ်ဝတ်ပြုသော ကိစ္စတွင် ဟာဒီးစ်အဆိုများသည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်နှင့်ဆန့်ကျင်လျှက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ဟာဒီးစ်အဆိုတစ်ရပ်တွင်အမျိုးသ္မီးများ သောကြာဆွလာ့သ်ဝတ်ပြုရန် တောင်းဆိုလာပါလျှင် သက်ဆိုင်ရာ အာလင်မ်ပညာရှင်များနှင့် အာဏာပိုင်များမှ ငြင်းဆိုခွင့်မရှိကြောင်းလာရှိသည်။ ထိုအဆိုအရဆိုလျှင် အမျိုးသ္မီးများဗလီ၌ ဆွလာ့သ်ဝတ်ပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်ဟန့်တားပိုင်ခွင့်မရှိပေ။
ဆိုလိုသည်မှာအစ္စလာမ်သည် လွယ်ကူသောအမြင်ကျယ်သော သာသနာဖြစ်သည်။ တရားသေဝါဒကိုအမြဲတန်းဆန့်ကျင်၍ တရားရှင်ဝါဒကို ကျင့်သုံးသော သာသနာဖြစ်သည်။
Special thanks to Than
Posted by Ordinary person at 1:53 AM2comments:
လိုင်လသွရ် ကဒရ်ညမြတ်၏ အရေးကြီးမှု
(၁)။ ဧကန်စင်စစ် ငါအရှင်မြတ်သည် ထိုအရာ (ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ) အား ကဒရ် ညမြတ်တွင်ချပေးတော်မူခဲ့လေ၏၊
(၂)။အို..တမန်တော်..... ကဒရ် ညမြတ်သည် မည်သို. သောညမျိုးဖြစ်သည်ကို အသင်သိပါသလော?
(၃)။ကဒရ်ညမြတ်သည် လပေါင်းတစ်ထောင် ထက်သာပိုကောင်းမြတ်ပေသည်။
(၄)။ထိုညတွင်ကောင်းကင်တမန်ဟဇရသ်ဂျိဗ်ရာအီလ်း (အတ်စ်လာသို ၀စလာမ်) နှင့် အခြားသော ကောင်းကင်တမန်အပေါင်းတို.သည် အလာဟ်အရှင်မြတ်၏အမိန်.တော်ဖြင့် ကောင်းချီးအလုံးစုံကိုယူဆောင်ပြီး ဆင်းသက်တော်မူ၏။
(၅)။ထိုကဒရ်ညမြတ်သည်ကား ချမ်းမြေ့သာယာမှုအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသောညဖြစ်ပြီး နံနက်မို.သောက်ချိန်အထိ ထူးမြတ်မှုရှိနေပေသည်။
ယင်းစူရာအာယာသ်းတော်သည် မက္ကာဟ် ရွှေမြို.တော် တွင်ကျရောက်ခဲ့သည်၊ အာယာသ်းပေါင်း ( ၅ ) အာယာသ်းပါရှိ၏၊ ကျရောက်ပုံနှင့်စပ်လျဉ်းပြီးရှေံတွင်ဖော်ပြပါအံ့။
အလာဟ်အရှင်မြတ်သည်ခုနှစ်ရက် တစ်ပါတ်အနက် သောကြာနေ.ကိုလည်းကောင်း၊ တစ်ဆယ့်နှစ်လ အနက် ရမ်သွာန်လမြတ်ကိုလည်းကောင်း ၊ထူးမြတ်မှုများ ချီးမြင့်ထားတော်မူသည်၊ထိုကဲ့သို.ပင် ညများအနက် "ရှာဗေကဒရ် " မည်သော ညတစ်ညကိုလည်း ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့၏ ၊ ယင်းညကို အာရဗီဘာသာဖြင့် (လိုင်လသွရ်ကဒရ်)ဟုခေါ်သည်။
ထိုညဉ့်မြတ်အား အဘယ့်ကြောင့် လိုင်လသွရ်ကဒရ် ဟုခေါ်ဆိုရပါသနည်း ?ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် အကျယ်ပြန် (သဖ်စီရ်း) ပညာရှင်များက ယင်းအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အကြောင်းရင်း (၃) ရပ်ဖော်ပြထားပါသည်။
(၁)လိုင်လသွရ်ကဒရ် စာလုံးတွင် "ကဒရ်" ၏အဓိပ္ပာယ်မှာ သတ်မှတ်ချက်၊ ကံကြမ္မာနှင့်ဟူရု် အဓိပာယ်ရသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုညဉ့်မြတ်တွင် အဖန်ဆင်းခံအားလုံးအတွက် ယခုရမ်ဇာန်မှနောင်ရမ်ဇာန်လမြတ်အထိ လူသားတို.၏ ကံကြမ္မာသတ်မှတ်ချက်များအား ထိုညမြတ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ဖရှစ်ရ်ှသာ များထံ အပ်နှင်းလိုက်သည်။ ထို.ကြောင့် ယင်းညအား လိုင်လသွရ်ကဒရ် ဟု ခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်သည်၊
(၂) ဒုတိယ အကြောင်းအရင်းမှာ "ကဒရ်" စာလုံး၏အနက်အဓိပ္ပာယ်မှာ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခြင်းဟူရ်ုလည်းဖြစ်ပေသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုညမြတ်တွင်နိုးနိုးကြားကြား ၊ ကြိုးကြိုးစားစား အီဗာဒာသ်း ခ၀ပ်မှုပြုသူသည် အလာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်ပါး ဂုဏ်သိက္ခာ ကြီးမြင့်သူဖြစ်ပေသည် ၊
(၃)တတိယအကြောင်းအရင်းမှာ "ကဒရ်" ဟူသောစာလုံးသည် "ကျဉ်းမြောင်းခြင်း " ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ုအကြောင်းမှာ ထို(လိုင်လသွရ်ကဒရ်) ညဉ့်မြတ်တွင် ထိုည၏ ထူးမြတ်မှုကြောင့် ဖရစ်ရ်သာ ၊ ကောင်းကင်တမန်များ များပြားစွာ ပထ၀ီမြေပြင်သို.ဆင်းသက်လာကြသည် မှာ ယင်းတို.ကြောင့် မြေနေရာပင် ကျဉ်းမြောင်းသွားကြပေသည် ၊
အထက်ပါအကြောင်းအရင်းများကြောင့် ယင်းညမြတ်အား " လိုင်လသွလ်ကဒရ် " ဟုခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်
ကဒရ် ညမြတ်၏ ထူးခြားချက်များ
(၁)ထိုညမြတ်သည်နေ၀င်ချိန်မှစတင်ပြီး နံနက်မို.သောက်ချိန်အထိ ငြိမ်းချမ်းသောညပင်ဖြစ်ခြင်း၊
(၂)ထိုညတွင်ကောင်းကင်တမန်များသည် အလာဟ်အရှင်မြတ်အမိန်.တော်ဖြင့် ကောင်းမြတ်သော အရေးကိစ္စဟူသမျှကိုယူဆောင်ပြီးကမ္ဘာမြေပေါ်သို.ဆင်းသက်လာကြခြင်း၊
(၃)အထူးသဖြင့် ကောင်းကင်တမန်ကြီးဟဇရာသ်း ဂျိဗ်လာအီလ်း (အတ်စ်လာသို ၀စလာမ်)သည်ထိုညတွင် ဆင်းသက်လာခြင်း၊
(၆)ထိုညတွင်ကောင်းကင်တမန်များထံမှမုအ်မင်န်များအပေါ် " စလာမ် " မေတ္တာပို.သမှုရှိနေခြင်းတို.ဖြစ်ကြလေသည်၊
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် သည်(၂၃)နှစ်တိုင်တိုင် တမန်တော်မြတ်(ဆွလလ်လားဟုအလိုင်မ်ဟိဝဆွလာမ်)အပေါ်သို.ကျရောက်ခဲ့သည်။ယင်းအပြင် ပထမဦးဆုံး ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကျရောက်ချိန်တွင်ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွလလ်လားဟုအလိုင်မ်ဟိဝဆွလာမ်)၏ သက်တော်မှာ (၄၀) နှစ်စတင်သည့်အချိန်ဖြစ်ပြီး ရဗွီအွလ်အောင်ဝလ်လမြတ်တွင်ကျရောက်ခဲ့သည်။
ယင်းအပြင် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်တွင်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ကျရောက်ခဲ့သည့်အချိန်နှင့်စပ်လျဉ်းပြီးအချိန်ကာလ (၃)နေရာကို ရည်ညွှန်းထားလေသည်၊ယင်းတို.မှာ .............
(၃) ဗရာအသ်း, ညတို.ဖြစ်ကြသည်၊..
ထိုကာလ(၃)မျိုးလုံးတွင်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကျရောက်ကြောင်းသိရှိရပေသည်၊ဆိုလိုသည့်သဘောမှာ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရန်အာန်၏တစ်နေရာတွင် "လမြတ်ရမ်ဇာန်တွင် ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကျရောက်ခဲ့သည်ဟု"ဖေါ်ပြပါရှိ၏၊အချို.နေရာတွင်ကဒရ်ညမြတ်တွင်လည်းကောင်း၊ရှာဗေဗရာအာသ်းညမြတ်တွင်လည်းကောင်းကျရောက်ခဲ့သည်ဟုဖေါ်ပြပါရှိလေသည်။
ရှေးဦးစွာ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်တခုလုံးသည် (လောင်ဟေ့မဟ်ဖူဇ်း)ထိမ်းသိန်းထားတော်မူသော ကျောက်စာမှ (ဗိုင်သွလ်အိဗ်ဇသ်)မို.ကောင်းကင်ပင်ပထမထပ်ရှိနေရာသို.တစ်ိပြိုင်တည်းကျရောက်လာလေ၏၊ထိုအချိန်သည်ရမ်ဇာန်လမြတ် ကဒရ် ညတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ယင်းအပြင် (လောင်ဟေမဟ်ဖူဇ်း)ကျောက်စာကြီးအား စောင့်ကြပ်သည့် ဖရှစ်ရ်သာ ကောင်းကင်တမန်များကို အလာဟ်အရှင်မြတ်က ယင်းကျောက်စာကြီးမှ ကူးယူပြီးမိုးကောင်းကင် ပထမ ထပ်သို. ယူဆောင်သွားရန်အမိန်.ပေးသည့်အချိန်ကား "ရှဗေဗရာအာသ်း " ညဖြစ်ခဲ့သည်၊
ထိုမှတဖန် တမန်တော်မြတ်(ဆွလလ်လားဟုအလိုင်မ်ဟိဝဆွလာမ်)သက်တော် (၄၀) စတင်သည့်အချိန် ရဗီအွလ်အောင်ဝလ်လတွင် (ဗိုင်သွလ်အိဇ်ဇသ်)မို.ကောင်းကင်ပထမထပ်နေရာမှ တမန်တော်မြတ်ကြီးအပေါ်သို. လိုအပ်သလို ကျရောက်ခဲ့ပြီး (၂၃)နှစ်တာ ကာလအတွင်းအပြီးသတ်ကျရောက်ခဲ့ပါသည်၊
ယင်းအပြင် ကိုယ်တော်ကွယ်လွန် (၀ဖါသ်း)ဖြစ်သည့် အချိန်မှာ (၆၃) နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်၊
(သဖ်စီးရေ.အဇီဇီ- ပါရာ, ကဏ္ဍ၃၀/စာ၄၃၈)
ကဒရ် ညမြတ်သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး၏အွမ္မသ်သားများအတွက် သီးသန်.ဖြစ်ခြင်း
လိုင်လသွရ်ကဒရ်ခေါ် ကဒရ်ညမြတ်သည် ကိုယ်တော်၏ အွမ္မသ် နောက်လိုက် များအတွက် သာသီးသန်. ချီးမြှင့်ခြင်းခံရပြီးအခြားမည်သည့် အွမ္မသ် အုပ်စုကိုမျှချီးမြှင့်ခြင်းမခံရပေ။ယင်းကိတ်စနှင့်စပ်လျဉ်းရ်ုဟဒီစ်းတော်တွင်လာရှိထားပေသည်..။
"ဧကန်အမှန်အလာဟ်အရှင်မြတ်သည်ကဒရ်ညမြတ်အားငါကိုယ်တော်၏အွမ္မသ်သားများအတွက်သာလျင် ချီးမြင့်တော်မူ၏။ထို.အလျင် မည်သည့်အွမ္မသ် နောက်လိုက်ကိုမျှ ချီးမြင့်ခြင်းမခံရပေ။
(ဒွရ်ရေ.မန်ဆူရ်းကျမ်း) အတွဲ ၆ / စာ ၃၇၁-
(အွမ္မသ် ) အုပ်စုအတွက် ကဒရ် ညမြတ်သီးသန်.ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် အကျယ်ပြန် (သဖ်စီရ်း)ပညာရှင်များကအောက်ပါအတိုင်းရေးသားဖွင့်ဆိုထားသည်ကို တွေ.ရှိရပါသည်။
(၁)ဟဇရသ်မူဂျာဟိဒ်(ရဟ်) သခင်က အမိန်.ရှိသည်မှာ.....
ဗနီအိစ်စရာအိလ်အနွယ်ဝင်အမျိုးသားတဦးရှိခဲ့သည်။ထိုအမျိုးသားသည် ညအခါ (အီဗာဒသ်း) ခ၀ပ်မှုတွင်ရှိနေပြီး နေ.အခါ ရန်သူများနှင့် တိုက်ခိုက်ရန် ဂျေဟာဒ်း စစ်မြေပြင်တွင်ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ နှစ်ပေါင်းတထောင် အထိရှိခဲ့သည်။ ထိုအတိုင်းကျင့်ကြံခဲ့သည်။ သို.ဖြင့် အလာဟ်အရှင်မြတ်သည် အာယတ်တခုအားချပေးခဲ့တော်မူလေသည်၊ ယင်းအာယသ်း၏လိုရင်းသဘောမှာ " ကဒရ် ညမြတ်သည် လပေါင်းတစ်ထောင် " ထက်သာ ပို ကောင်းမြတ်ပေသည် ဟူ၏ ။
အလိုသဘောမှာ ထို ကဒရ် ညတစ်ည၏ အီဗာဒသ်းခ၀ပ်မှုသည် လပေါင်းတစ်ထောင် ကောင်းမှု ပွားများခြင်းထက် ပိုကောင်းမြတ်လေသည်ဟု လာရှိပေသည်။
(၂)ဟဇရသ်းအလီ(ရသွီယလ်လားဟုသအားလာအန်ဟုမား)သခင်နှင့် အွရ်ဝါဟ်(ရသွီယလ်လားဟုသအားလာအန်ဟုမား)သခင်တို.က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလလ်လားဟုအလိုင်မ်ဟိဝဆွလမ်) သခင်သည်တစ်နေ.သောအခါဗနီအိစ်စလာအီလ်း ပုဂ္ဂိုလ် (၄)ပါးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့သည်။...ယင်းတို.မှာ ..........
(၁) ဟဇရသ် အိုင်ယူဗ်း(အတ်စ်လာသို ၀စလာမ်) ၊
(၂)ဟဇရသ် ဇကရီယာ (အတ်စ်လာသို ၀စလာမ်) ၊
(၃)ဟဇရသ် ဟဇ်ကီလ်း (အတ်စ်လာသို ၀စလာမ်) ၊
(၄)ဟဇရသ် ယူရှအ်ဗင်န်နူန်း(အတ်စ်လာသို ၀စလာမ်) ၊ တို.ဖြစ်ကြသည်။
ယင်းပုဂ္ဂိုလ် (၄)ပါးတို.သည် နှစ်ပေါင်း (၈၀) တိုင်တိုင် အလာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန်.ကို ဖီဆန်ခြင်းမရှိပဲ အိဗာဒသ်း ခ၀ပ်မှုများတွင်သာ ကုန်လွန်ခဲ့ကြသည်။........
ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွလလ်လားဟုအလိုင်မ်ဟိဝဆွလမ်) ၏ အတိုပါ မိန်.ခြွေစကားရပ်ကိုကြားသိရပြီး ဆွဟာဗာ တော်တော်များများ တအံ့တသြ ဖြစ်ကြကုန်၏ ။
ဟဇရသ်ဂျိဗ်ရာအီလ်း( အတ်စ်လာသို ၀စလာမ်) ကြွမြန်းရောက်ရှိလာပြီးပြောကြားသည်မှာ....
အသင်၏အွမ္မ်သည် ထိုပု၈္ဂိုလ်များ၏နှစ်ပေါင်း(၈၀)အီဗာဒသး ခ၀ပ်မှုများအပေါ် အံ့သြ အားကျနေကြသည် ။ အလာဟ်အရှင်မြတ်သည် ထို. ထက် အံ့သြစရာ ကောင်းသော စကားရပ်များ အားအသင်၏ အွမ္မသ်သားများအပေါ်သို.ပို.ချပေးလိုက်သည် ဟုပြောကြားပြီး စူရာဟ် "ကဒရ်" အားဖတ်ကြားပြသတော်မူ၏။...........
ဧကန်အမှန်ငါအရှင်မြတ်သည် ထို(ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်)အား ကဒရ် ညဉ့်မြတ်တွင် ပို.ချပေးသနားတော်မူ၏၊ထို ကဒရ် ညဉ့်မြတ်သည်ကား လပေါင်းတထောင် ထက်သာ ပိုကောင်းမြတ်ပေသည် ။....
ယင်းစူရာဟ်သည် ကိုယ်တော်နှင့်ကိုယ်တော်၏ အွမ္မသ် နောက်လိုက်များအတွက် အံ့သြအားကျနေသည့်အရာထက်ပိုရ်ုပင် အံ့သြစရာ ကောင်းပေသည်ဟုကောင်းကင်တမန်ဂျီဗရာအီလ်း(အတ်စ်လာသို ၀စလာမ်)ကပြောကြားလေသည်။ထိုသတင်းကိုကြားပြီး တမန်တော်မြတ်(ဆွလလ်လားဟုအလိုင်မ်ဟိဝဆွလမ်) နှင့်ဆွဟာဗဟ် သခင်ကြီးများသည်ပျော်ရွှင်မဆုံးဖြစ်သွားကြကုန်၏။......
(ဒွရ်ရေ.မန်ဆူရ်း-အတွဲ၆ / စာ၃၇၁)
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အားမည်သို.သော အမြော်အမြင်ကြောင့် ညချမ်းအချိန်ချပေးရပါသနည်း။ ထိုမေးခွန်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီးရှိတ်ခ်အစ်စမာအီလ်း(ရဟ်)သခင်က အောက်ပါအတိုင်းဖြေဆိုရေးသားထားသည်။...
(၁) ဗရကာသ်း မင်္ဂလာ အဖြာဖြွာနှင့်ကောင်းချီးအဖုံဖုံ တို.သည်လည်းကောင်း၊ မေအ်ရာဂ်ျကောင်းကင်ဘုံခရီးသော်လည်းကောင်း ညအချိန်တွင်သာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
(၂)ညချမ်းအချိန်သည်ဂျန္ဒသ် သုခဘုံ၏တစိတ်တဒေသ ဖြစ်ပြီး အပန်းဖြေ အနားယူသည့် အချိန်လည်းဖြစ်သည်။
(၃) နေ.အချိန်သည်ကား ဒိုဇခ် ငရဲနှင့်ဆင်တူပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံရခြင်း၊ ရိုဇီ ရိက္ခာ အတွက် အပင်ပန်း ခံရခြင်းတို. ရှိနေပေသည်။
(၄)ညအချိန်သည် မိမိ၏ ချစ်ဇနီးနှင့် ဆုံတွေ.ရသည့် အချိန်ဖြစ်ပြီး နေ.အချိန်သည်ကား ချစ်သူနှင့်ခွဲခွာ ရသည့် အချိန်ဖြစ်သည်။
(၅)ညအချိန်ပြုလုပ်ကျင့်ဆောင်သော အီဗာဒသ်း ခ၀ပ်မှုသည် နေ.အချိန်ပြုလုပ်သည့် ခ၀ပ်မှုထက် သာပိုပြီး ထူးမြတ်မှုရှိခြင်းတို.ကြောင့် ဖြစ်သည်။
နောက်ဆက်ပြီးတင်ပြပေးသွားပါ့မယ် နော် အားလုံးပဲ
နေကောင်းလို.ပျော်ရွှင်စေပြီး ရမ်ဇာန်လမှာ ရိုဇာ တလလုံးထားနိုင်တဲ့ သော်ဖီစ်
အလာဟ်ပေးသနားတော်မူပါစေ ( အာမင်း)
Posted by Ordinary person at 12:23 PM No comments:
Posted by Ordinary person at 9:10 PM No comments:
Posted by Ordinary person at 10:25 AM No comments:
Easy du'a for Ramadan
Posted by Ordinary person at 10:54 PM No comments:
75 days in Bangkok - part 1
2010 မေလဆန်းမှာ ကျောင်းကအိမ်ပြန်တာနဲ့ လျှောက်ထားတဲ့ Passport
လာရွေးရန် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကြားစာလေးကိုတံခါးဖွင့်တာနဲ့
ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ တွေ့လိုက်ရလို့ ဝမ်းသာသွားပါတယ်။
Passport ရွေးပြီးတာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကို ဘန်ကောက်
သွားလည်တော့မဲ့ အကြောင်း ကြားပြီး လေယဉ်လက်မှတ်ဝယ်ရန်
အင်ငာာနက်ပေါ်မှာ ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ နောက် ၂ ရက်
မှာဘဲ လေယဉ်လက်မှတ်ဝယ်ပြီး လိုတဲ့စာရွက်စာတန်းတွေ
စုစည်းလိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းက မေလ ၂၁ ရက်နေ့မှပြီးမယ်ဆိုတော့
ဆရာမသင်တာ သိပ်စိတ်မပါတော့ပါဘူး။ နားကြားထဲခဲတံ
ထိုးပြီး ကျောင်းခုံကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ဖွဖွလေး
ခေါက်နေမိတယ်။ မျက်လုံးတစ်စုံက ကျောင်းအပြင်က ချယ်ရီပန်းပင်
တွေကိုငေးမောကြည့်ရင်း ဟိုး.... အဝေးမှာရှိတဲ့ အဖေကို
ဘဲသတိရနေပါ တော့တယ်။ ဟင်း.... မတွေ့တာလည်း ၅ နှစ်တောင်
ကိုယ့်အဖြစ်ကို ကျောင်းခန်းထဲက classmateအစ်မတွေက
ပြုံးပြီးကြည့်နေပါတယ်။ သူတို့ထက်လည်းငယ် ကျောင်းနဲ့
ဆရာမတွေဘက်က မဟုတ်မမှန်တာမြင်ရင် မကြောက်မရွံ့
ထပြောတတ်တဲ့အကျင့်၊ ဆရာမတွေကိုအကြံပေး တတ်တဲ့
အကျင့်၊ မဟုတ်မခံအကျင့် တွေရှိတဲ့ဒီညီမကို အတန်းထဲက
အစ်မတွေက ချစ်ကြတယ်လေ။ ကျောင်းပြီးတဲ့နေ့ မှာတော့
ကျောင်းဆရာကြီးက ''တို့သင်ခဲ့တဲ့ အတန်းတွေထဲမှာဒီအတန်းက
ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေက အတော်ဆုံးတဲ့'' ကျောင်းသားအားလုံး
ဟေးကနဲပျော်ပြီး ထအော်ကြတာပေါ့။ မေလ ၂၁ရက်နေ့မှာ
ရယူခဲ့ရတယ်၊ လျှောက်လည်းလည်ရတယ်။ စာနဲ့ပင်ပန်းခဲ့ရပြီး ဒီနေ့
ခဏလေးနဲ့ ကုန်သွားပါတယ်။ အိမ်မှာလည်းမွေးထားတဲ့ Guppy ငါးတွေနဲ့
မွေးကင်းစ ငါးပေါက်စလေးတွေ ဘယ်လို
ကြည့်ရမယ် အပင်တွေဘယ်နှစ်ရက်တစ်ခါရေ လောင်းရမယ်
အဲ ... မေလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ ဘူတာရုံကိုဆင်းခဲ့ပါတယ်။ အိမ်နဲ့ ဘူတာရုံက ၁၀ မိနစ်ဘဲလမ်းလျှောက်ရပါတယ်။ အမြန်ရထား ၁ နာရီဆီးပြီး Airport bus ပေါ်ကောက်တက်လိုက်ပြီး နာရီဝက်မှာ လေဆိပ်ကိုရောက်လာပါတယ်။
Posted by Ordinary person at 2:19 AM No comments:
ခင်မင်တဲ့ မောင်နှမတွေ အတွက် Yen ta fo တရုတ်ခေါက်ဆွ...
Windows7အသုံးပြုသူများအတွက် Microsoft မှ ၄င်း၏အာ...
13.5 Kg Weight Quran-e-Karim Written by Indian Emp...
အမျိုးသ္မီးများ သောကြာဆွလာ့သ်ဝတ်ပြုရန် တောင်းဆိုလာပ...